Yini “ushukela omkhulu” kanye “noshukela ophansi” oyingozi empilweni? Ukulimala ushukela emzimbeni > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Yini “ushukela omkhulu” kanye “noshukela ophansi” oyingozi empilweni? Ukulimala Ushukela: Umhlanga, uBrown, uBurnt
Wademoniwa futhi wabizwa imbangela yalolu bhubhane lokukhuluphala. Kepha ushukela awunampilo ngempela? Ngabe wonke ushukela uyafana? Yilokho isayensi ekushoyo.
Uma ushukela mubi futhi “unobuthi,” yini-ke okufanele ucabange ngayo ngesithelo?
Lo ngumbuzo ozwisisayo ongaphendulwa ngokujwayelekile - noma futhi onakwe - labo abacabanga ngokudla okungenawo ushukela.
Ngaphambi kokunqotshwa umbono olula wokuthi ushukela uyimpande yakho konke okubi, cabanga ngesimo esifanayo. Izolo, amafutha abeyingozi futhi bekufanele ukuthi awakhiphe ekudleni. Namuhla, basendleleni yokuthola isizathu - ezinye zazo azilimazi njengoba bekucatshangwa, kanti ezinye zilungele impilo.
Kepha emiqondweni yabantu abaningi kwakukhona isitha "esisobala": ama-carbohydrate, noma ngokunembile - ushukela.
Noma kunjalo, umbuzo uhlala, "ingabe ukuphuza ushukela kuyakulimaza" noma ngabe kuthathwa umthamo, noma, ezimweni nakho konke okunye, umbuzo uwukuthi uyidla kangakanani futhi uvelaphi? Uma ugxila kakhulu kwisayensi, uzothola ukuthi uma ufuna ukunciphisa umzimba, uphile isikhathi eside futhi uzizwe ujabule nsuku zonke, akudingeki ushiye ushukela ngokuphelele.
Ushukela ungaphezu nje kwento emhlophe oyifaka ekhofi lakho. (Lokhu kufana.)
Ku-biochemistry, ushukela kungaba yi-monosaccharide noma i-disaccharide (“saccharides” elinye igama le- “carbohydrate”).
I-Monosaccharide - Ushukela Olula
I-Disaccharide - ushukela oqukethe ama-monosaccharides amabili
I-oligosaccharide iqukethe ushukela ongu-2 kuya ku-10 olula
I-polysaccharide iqukethe ushukela owodwa noma ngaphezulu olula (ama-molecule angama-glucose angama-300 kuye kwangama-1000 esitashi)
Ngamafuphi, wonke ama-carbohydrate aqukethe ushukela owodwa. Uma sibuyela emuva kwisibonelo se-sucrose, noma ushukela wethebula, empeleni yi-disaccharide eyenziwe ngoshukela olula, ushukela kanye ne-fructose.
Okwamanje, isitashi, i-fiber yokudla, i-cellulose ngama-polysaccharides. Futhi uma isivele ikhona, bese iyahamba: i-fiber - abantu abaningi abayazi njengengxenye enhle - nayo iyindlela kashukela.
Kulezi zinto ezintathu ezingenhla, singagaya kuphela isitashi, esiqukethe ushukela. Cishe uke wezwa igama elithi "ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi" noma "ama-carbohydrate aphambili," isitashi sibhekisa kulezi. Babizwa behamba kancane ngoba umzimba udinga isikhathi ukubaphula ushukela ngamunye (ikakhulukazi, ushukela, "izinga likashukela wegazi" lethu).
Ngakho-ke, umqondo wokudla ngokuphelele "ushukela" ngokuphelele kusho ukuyeka ukudla okuningi okunempilo ngokuphelele. Vele, ungaphila ngaphandle koshukela noma ngisho nama-carbohydrate. kodwa kuphela ngoba umzimba wakho ukwazi ukuhlanganisa i-glucose eyidingayo kuma-acid acid nama-amino acid.
Lokhu kungenxa yokuthi umzimba wakho udinga ushukela. I-glucose iyadingeka njengamafutha emisebenzini ebalulekile efana nomsebenzi wohlelo lwezinzwa noma ubuchopho. (Yebo, ubuchopho bakho abusebenzi kuphela ngenxa yeglucose, kepha buyayidinga, buyasiza nokusebenzisana kweseli.)
Futhi okubaluleke kakhulu: kunokudla okuningi okunempilo okuqukethe ushukela (bheka ngezansi). Ukudla okungenawo ushukela odinga ukuthi konke lokhu kudla kulahlwe kungabhekwa njengokuthembekile, akunjalo? Futhi nanti iphuzu: noma yikuphi ukuya ngokweqile kuvame ukuba nephutha, kufaka phakathi isitatimende esijwayelekile "ungadli ushukela."
Uhlu lwamaswidi olungenangozi ukuludla
Ungavumeli ukunyundelwa ushukela kukwesabise. Yonke imikhiqizo evela kulolu hlu inempilo - ngaphandle kokuthi uyayibamba ngamabhakede, noma uyithulule isiraphu.Futhi yebo, ngamunye wabo uqukethe ushukela. Ngisho nase-kale.
Isinkwa esiphelele sokusanhlamvu (esenziwe ngaphandle kweshukela)
Ama-All Grain Crackers
Inyama eyomile (sesha ngaphandle koshukela ongeziwe)
Imigoqo yamaphrotheni (hlola ukuthi ushukela akuyona eyokuqala ekwakhiweni)
Iziphuzo zemifino (kusuka ku-powder)
Amafutha e-Walnut (alikho ushukela ongeziwe)
Hambisa ngaphandle kwezengezo
Impendulo yombuzo: ingabe ushukela uyingozi?
Njengakwezinto eziningi empilweni, ukulimala kuncike esivamile.
Njengoba sekushiwo, umzimba wakho udinga ngempela ushukela, okubi kakhulu ukuthi uzokhiqiza amanye awo, noma ngabe ukhipha wonke ama-carbohydrate ekudleni kwakho.
Kepha ukuphuza ngokweqile ushukela kuholela kuhlobo II sikashukela nokukhuluphala (yize uzokweqisa kusuka ekudleni ngokweqile, noma ngabe ungasebenzisi i-carbohydrate eningi). Ushukela omningi futhi uholela ekukhuleni kwenani lemikhiqizo yokuphela kwe-glycation, futhi ngenxa yokulimala kwesikhumba kanye nengozi enkulu yomdlavuza nesifo senhliziyo.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ushukela ongeziwe ungaba yingozi, hhayi ngoba "ubangela umlutha njenge-cocaine" (ungaba umlutha, kepha awunamandla njenge-cocaine noma umlutha wokudla). Ingozi yangempela yoshukela akuyona ukuthi bayalulama. Ku-1 gramu kashukela, kukhona nama-kilojoule ama-4 kuphela. Futhi kusuka kumakhalori angama-4 ngeke ukhuluphele. Kodwa-ke, ungakwazi ukugwinya ushukela omningi futhi ungazizwa ugcwele. Futhi udla okuncane. bese kuthi okunye. bese-ke futhi. bese ubona ukuthi ibhokisi lamakhukhi alinalutho, kepha indlala isekhona.
Ngoshukela ongeziwe kungalula kakhulu ukuthi uhambe kakhulu. Lesi sitatimende siyiqiniso komunye nomunye wabo, noma ngabe igama lakhe lizwakala linempilo kangakanani. Isibonelo, "ushukela umoba" unempilo kakhudlwana kuneminye imithombo ye-sucrose, yize kungokwemvelo. Ngokuphambene nalokho, i-sitrobisi yommbila ophezulu we-fructose (ngokuvamile i-55% fructose ne-45% ushukela) akukubi kangako kune-sucrose (50% fructose, 50% ushukela).
Ushukela ocashile ikakhulukazi ohlotsheni oluwuketshezi. Ungaphuza futhi uphuze, futhi uwaphuze ngamanani amakhulu, kuqhathaniswa namakhalori ekudleni okunezifundo ezi-5, futhi uhlale ulambile. Mhlawumbe lokhu akumangazi ukuthi iziphuzo ezithambile zihambisana nobhubhane lwamanje lokukhuluphala. Kuze kube manje, i-akhawunti ye-soda ne-cola engama-34.4% yenani lonke likashukela ongeziwe ophuzwa abantu abadala nezingane e-United States, futhi ungumthombo wayo oyinhloko ekudleni kweMelika ejwayelekile.
Kulokhu, amajusi wezithelo akuyona inketho enempilo. Eqinisweni, zingaba zimbi ngokwedlulele. Ngani? Ngoba ushukela oqukethwe ujusi wezithelo yi-fructose, ongakhipha ingcindezi esibindini (isibindi kuphela esikwazi ukucubungula i-fructose ngamanani amakhulu anganqamuki). Idatha yamanje ibuye ikhombise ukuthi ukudla i-fructose kuholela ekuzuzweni kwesisindo esengeziwe kune-glucose.
Kepha le nkulumo ayilona iqiniso ngoshukela otholakala kwimifino nezithelo. Eqinisweni, kuyadingeka ukucacisa ukuthi namuhla:
AKUKHO BUFAKAZI BOKUTHI KUSEBENZISA IZINHLOBO, NGENXA YOKUQHAWULA IZIMPENDULO, KUZOBUYA NGEMPILO YAKHO.
Ngokungafani namajusi wezithelo, izithelo zonke ziyanelisa indlala. Ama-apula, noma enzima, angama-10% ushukela. futhi ama-85% amanzi, yingakho kunzima ukudla kakhulu kuwo.Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwakamuva luveza ukuthi izithelo zingasiza ukulawula ushukela wegazi.
Kukhona isiphuzo esisodwa “sikashukela” esingalethi usongo olufanayo: ubisi. Ngenkathi ubisi luqukethe ushukela (i-lactose, i-glucose disaccharide ne-galactose), okuqukethwe kwayo kungaphansi kakhulu kunaleyo yejusi yezithelo, ngaphezu kwalokho, ubisi luqukethe ne-protein namafutha. Ngesikhathi lapho amafutha ayethathwa njengezitha, ubisi lwe-skim lwaluthathwa njengolunempilo kunobisi lonke, kepha namuhla alunjalo. Manje ukuthi amafutha (ngokwengxenye) anokulungiswa, ubisi luphelele, lusekelwa yingcebo yobufakazi, selubuyile ngemfashini.
Izinga likashukela nsuku zonke
Izazi zezempilo sezisungule ukuthi isilinganiso esivamile soshukela akufanele sidlule ngaphezulu kwe-30-50 g ngosuku kumuntu omdala, no-10 g ezinganeni, futhi lokhu kufaka ushukela ongezwe ekudleni okuqediwe, iziphuzo nezitsha ezenziwe ekhaya.
Bona ukuthi ushukela osemuva ungakanani ekudleni. Isilayi esisodwa = 5 amagremu kashukela.
Ushukela uthinta kabi amathambo
Ukuze udonse ushukela ocolisisiwe, umzimba udinga ukuchitha i-calcium eningi, ngakho-ke i-calcium ihlanzwa ngaphandle kwezicubu zamathambo ngokuhamba kwesikhathi.
Le nqubo inomthelela ekubukekeni kwamathambo, ngenxa yokuncipha kwezicubu zamathambo, amathuba okuqhekeka kukhuphuka, kuleli cala ukulimala ushukela kufanelekile ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, ushukela uvusa ukuthuthukiswa kwama-caries. Lapho ushukela udliwa emlonyeni womuntu, i-acidity ikhuphuka, iyindlela ekahle yokusakazeka kwamagciwane angama-pathogenic alimaza i-enamel yezinyo.
Ushukela kuqinisekiswe ngokweqile
Ushukela ugcinwa esibindini njenge-glycogen. Uma umthamo we-glycogen udlula okujwayelekile, khona-ke ushukela ufakwa emzimbeni ngesimo samafutha, imvamisa kakhulu okhalweni nasiswini.
Njengoba wazi, into eyodwa emzimbeni womuntu ingavuselela ukumuncwa kwenye into noma iwuvimbe. Ngokweminye imibiko, ukusetshenziswa koshukela namafutha ndawonye - kunomthelela ekuzuzeni isisindo. Kungashiwo ukuthi ushukela uvusa ukukhuluphala.
Ushukela uvusa indlala yamanga
Ososayensi babika ukuthi kunamangqamuzana obuchopho alawula isifiso sokudla futhi abangele umuzwa obunzima wendlala. Uma weqa inani lokudla elichithwa ngoshukela omningi, khona-ke ama-radicals mahhala azophazamisa ukusebenza kwama-neurons, okuholela ekuthambekeleni kwamanga. Lokhu kuzobonakaliswa ekudla ngokweqile kanye nokukhuluphala okwalandela.
Enye imbangela yendlala yamanga kungaba yisicefe ushukela wegazi. Lapho kudliwa, ushukela kuvusa ukwanda okusheshayo kwamazinga we-glucose nama-insulin, ukujwayelekile kwawo akufanele kudlule.
Ushukela uthinta isimo sesikhumba, okunomthelela ekugugeni
Ukusetshenziswa kashukela ngaphandle kwesilinganiso kuholela ekubukekeni nasekukhupheni imibimbi. Iqiniso ngukuthi ushukela ugcinwa ku-collagen esitokisini. I-Collagen yiprotheni eyakha isisekelo sezicubu ezithintekayo zesikhumba, inciphisa ukuqina kwesikhumba.
Ushukela yinto ebangela umlutha. Lokhu kufakazelwa izivivinyo ezenziwe ngamagundane elabhoratri.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi izinguquko ebuchosheni be-rat ziyafana nezinguquko ezenzeka ngaphansi kwethonya le-nicotine, i-morphine, noma i-cocaine. Ososayensi bakholelwa ukuthi ukuhlolwa komuntu kuzobonisa imiphumela efanayo, ngoba okujwayelekile akufanele kukhule.
Ushukela awuvumeli umzimba ukuthi ungenise ngokuphelele amavithamini e-B
Amavithamini we-B, ikakhulukazi i-thiamine noma i-vithamini B, ayadingeka ekugayweni nasekuthanjisweni kokudla okuqukethe ama-carbohydrate, i.e. isitashi noshukela. Akukho vithamini elilodwa leqembu B kushukela omhlophe. Kunamaphuzu athakazelisayo lapha:
Ukwehlisa ushukela omhlophe, amavithamini we-B kumele akhishwe esibindini, ezinsipheni, esikhunjeni, enhliziyweni, emisipha, emehlweni, noma egazini. Lokhu kuphumela ekushodweni kwamavithamini ezithweni.
Ngaphezu kwalokho, ukusilela kuzokhuphuka kuze kube yilapho umuntu esekwenza, ukudla ukudla okunamavithamini aleli qembu.
Ngokusebenzisa ushukela ngokweqile, amavithamini B andayo amaningi aqala ukushiya amasistimu nezitho zomzimba.
Umuntu uqala ukuhlupheka ngenxa yokuxineka okwandayo kwemizwa, ukungaboni kahle, ukuhlaselwa yisifo senhliziyo kanye ne-anemia.
Ukuphazamiseka kwesikhumba, ukukhathala, izifo zesikhumba kanye nemisipha, ukuphazamiseka kohlelo lokugaya ukudla kungabukwa.
Kungashiwo ngokuqinisekile ukuthi inani elikhudlwana lokwephulwa okusohlwini bekungeke livele ukube ushukela omhlophe ocwengekile ubengavinjelwe.
Uma umuntu edla ama-carbohydrate emithonjeni yemvelo, khona-ke ukuntuleka kwevithamini B1 ngeke kubonakale, ngoba i-thiamine, edingekayo ukuphula isitashi noshukela, ngokwemvelo ikhona ekudleni.
I-Thiamine, ikakhulukazi okujwayelekile, ibaluleke kakhulu empilweni yomuntu, ibamba iqhaza ezinqubweni zokukhula nasekusebenzeni kwendlela yokugaya ukudla. Ngaphezu kwalokho, i-thiamine ihlinzeka ngokudla okuhle futhi ithinta inhlala-kahle yonkana.
Ubudlelwano obuqondile phakathi kokusetshenziswa koshukela omhlophe kanye nezimpawu zomsebenzi wezinhliziyo kuyaziwa. Kuyiqiniso, ushukela ocwengiweyo uthinta kabi umsebenzi wenhliziyo. Ushukela omhlophe ubangela ukushoda kwe-thiamine, okunomthelela ku-dystrophy yesicubu semisipha yenhliziyo nokuqunjelwa uketshezi olungeqile, okugcwala ukuboshwa kwenhliziyo.
Ushukela wehlisa amandla
Abantu bakholelwa ngephutha ukuthi ushukela uwumthombo oyinhloko wamandla womzimba. Ngokusekelwe kulokhu, kuyisiko ukusebenzisa ama-ushukela amaningi ukubuyisa amandla. Lo mbono ngokuyisisekelo ungalungile ngezizathu ezilandelayo:
Kukhona ukushoda kwe-thiamine kushukela. Ngokuhambisana nokusilela kweminye imithombo ye-vithamini B1, kuba nzima ukuqedela i-metabolism ye-carbohydrate, okusho ukuthi ukuphuma kwamandla kuzobe kungenele: umuntu uzokwehlisa umsebenzi futhi kube nokukhathala okukhulu,
Imvamisa, ngemuva kokwehla kwezinga likashukela, ukunyuka kwalo kulandela. Lokhu kudalwa ukwanda okusheshayo kwamazinga e-insulin egazini, okuthi ngenxa yalokho kuholele ekwehleni kweshukela, futhi ngaphansi kwamanani ajwayelekile. Lapha ukulimala ushukela akunakuphikwa.
Ngenxa yalokhu, kukhona ukuhlaselwa kwe-hypoglycemia, ebonakala ngezimpawu ezilandelayo:
Kungani ushukela kuyinto evuselelayo?
Ushukela empeleni uvuselela amandla. Ngokushesha nje ngemuva kokuwusebenzisa, umuntu uthola umuzwa wokwenza okuthile nokukhuthaza okuthile kohlelo lwezinzwa olunozwela.
Ngokuphikisana nesizinda sokudla ushukela, kuye kwanda inani lokuphazamiseka kwenhliziyo, umfutho wegazi ukhuphuka kancane, ithoni yesistimu yezinzwa ye-autonomic kanye nesilinganiso sokuphefumula, futhi konke lokhu kungukulimaza ushukela okuletha emzimbeni.
Njengoba lezi zinguquko ku-biochemistry zingafaki ukusebenza ngokomzimba okufanelekile, amandla avelayo ngenxa yokwanda kwethoni lesistimu yezinzwa enozwela ayiqothuli futhi umuntu athuthukise isimo sengxabano. Ngakho-ke, ushukela ubizwa nangokuthi "ukudla okucindezelayo."
Ushukela usiza ukugoqa i-calcium
Ushukela ushintsha isilinganiso se-phosphorus / calcium egazini. Njengomthetho, izinga le-calcium lenyuka, futhi izinga le-phosphorus liyancipha, lesi yisizathu sokwephulwa kwe-homeostasis emzimbeni. Isilinganiso se-phosphorus / calcium sihlala sithikamezeka ngisho izinsuku ezi-2 ngemuva kokudla ushukela.
Ukushintshwa kwesilinganiso se-phosphorus ne-calcium akwenzeki ukuthi kungenise calcium ngokuphelele. Zombili izinto zihlanganiswa kahle kulengxenye: i-calcium 2,5 kuya ku-phosphorus 1. Uma lesi silinganiso sephulwa, khona-ke i-calcium eyengeziwe ngeke idonswe ngumzimba. I-calcium iyoshiya nomchamo noma ifake amadiphozithi aminyene izicubu.
Singafingqa: inani elanele le-calcium lingangena emzimbeni, kepha uma kuza noshukela, khona-ke ukumunca kwe-calcium ngeke kuphelele. Kungakho i-calcium ebisini elimnandi ingasoze yamunwa ngempumelelo.
Kuyadingeka ukukhipha ukusetshenziswa koshukela ne-calcium ndawonye, ​​ngoba ukuntuleka kwe-calcium kunomthelela ekwakhekeni kwama-rickets, isifo esihambisana nokushoda kwe-calcium.
Ushukela uyadingeka izinqubo ze-metabolic kanye ne-oxidation. Ushukela omhlophe awunazo izinto ezizuzisayo, ngakho-ke i-calcium ithathwa emathanjeni. Ukuntuleka kwe-calcium kuyimbangela yokwenza buthaka kwamazinyo namathambo, ushintsho, njengomthetho, luholele ekuqothulweni kwamathambo. Ukushoda kwe-calcium noma ama-rickets kungahlanganiswa nokusetshenziswa kakhulu koshukela.
Ukufingqa, singasho: ukungafaki izinkinga zempilo, kubalulekile ukukhipha ukulimala ushukela ekudleni ngokuqeda umkhiqizo uqobo uphelele noma ngokwengxenye.
Vele, awukwazi ukuyeka ukudla ushukela ngo-100%, ngoba kuyadingeka ekusebenzeni komzimba. Kepha umthamo wokuphuza ushukela kubalulekile ukunciphisa. Kungcono ukuqala ukuqeda ushukela ngokulahla ubisi oluhlanjululwe, amakhekhe, amaswidi, amajamu, okungukuthi, imikhiqizo enenani elikhulu likashukela elicwengekile ekwakhiweni kwayo, ungasebenzisa futhi
Ukulimala ushukela kudala futhi ngokusobala kufakazelwe. Kuyaziwa ukuthi ushukela omhlophe ocolisisiwewe uyisidina samandla esinamaprotheni, amafutha nezakhi zomzimba kanye nezinto zomkhondo.
Ushukela uyingozi, ungadala izinkinga ezingaphezu kwama-70 emzimbeni wethu, okuholela ezifweni ezimbi kakhulu, eziningi zazo ezingenakuphulukiswa futhi ezibulalayo.
Nakhu ongakwenza ushukela ocwengekile:
1. Kubangela ukwehla kokungazethezeki. Icindezela amasosha omzimba, yenze buthaka izindlela zokuvikela umzimba ezifweni ezingatheleleki.
2. Iphula ibhalansi yamaminerali emzimbeni futhi ibangele ukwephulwa komzimba wamaminerali. Okungaholela ekushoneni kwe-chromium. Umsebenzi oyinhloko we-chromium ukulawula ushukela wegazi.
3. Kubangela ukuntuleka kwezinto ezilandelwayo zethusi emzimbeni
4. Iphazamisa ukumuncwa kwe-calcium ne-magnesium.
5. Kubangela ukukhuphuka okubukhali kwezinga le-adrenaline, okungaholela ekucasukeni, ekuthokozeni, ekunakekelweni ukunakwa. Ezinganeni, lokhu kuvezwa yi-hyperacaction, ukukhathazeka, ukuphazamiseka kanye nobuthakathaka.
6. Kungadala ukwanda kwe-cholesterol yegazi.
7. Kuholela ezinguquko emazingeni kashukela nase-insulin. Kuholela ekwandeni kwamazinga kashukela kanye ne-insulin kwabesifazane abasebenzisa izithiyo zokuvimbela inzalo zehomoni.
8. Kuholela ekuluthweni kwezidakamizwa. Ngenxa kashukela wegazi ongazinzile, kudala ukukhathala, ikhanda elibuhlungu kanye nokukhathala. Ukusuka kulokhu kunesifiso sokudla amaswidi njalo. Ukusebenza kwamaswidi kuholela ekukhululekeni kwesikhashana, kepha ngemuva kwesikhashana umuzwa wokulamba kanye nesidingo samaswidi uya usiba sibi kakhulu.
9. Kungadala kakhulu i-hypoglycemia (ukwehlisa amazinga kashukela).
10. Ukhuthaza ukukhuluphala. Njengoba ikhemikhali entsha eyakhiwa ngesikhathi sokwelashwa okushisa kwengxube yamafutha, ushukela nosawoti (ukudla okusheshayo) ayikhishwa emzimbeni.
11. Ukhuthaza ukuthuthukiswa kwamakholi. Lapho ushukela namagciwane emlonyeni kuhlangana, kukhiqizwa i-acid ebhubhisa i-enamel yezinyo. Kepha isixazululo sikashukela uqobo siyindawo ene-acidic, ehlala emazinyweni ingabhubhisa izinyo. Yenza ukuhlolwa - faka izinyo eliwile engilazini ngeCoca-Cola, futhi uzobona kahle ukuthi ushukela ukude nomkhiqizo ongenangozi wezempilo yamazinyo.
12. Isiza esifweni sezinsini, njengesifo se-periodontal. Futhi ukutheleleka emgodini womlomo kungadala isifo senhliziyo. Lokhu kungenxa yokusabela komzimba ekuthelelekeni komzimba.
13. Kubangela ukwephulwa kokuzwela kwe-insulin, okungaholela kushukela nokufa.
14. Ukhuthaza ukuthuthukiswa kotshwala. Futhi ushukela uqobo usebenza njengento edakayo, efana notshwala noma isidakamizwa.
15. Kubangela ukuguga ngaphambi kwesikhathi, njengoba kusheshisa ukuqala koshintsho oluhlobene nobudala.
16. Uyimbangela yokuqaqanjelwa kwamathambo.
17. Ukhuthaza ushintsho (ukwanda noma ukuncipha) ekucindezelweni kwe-systolic.
18.Kungavusa ukuvela kwe-eczema ezinganeni.
19. Kubangela ukozela futhi kwehlise umsebenzi ezinganeni. Ikakhulu ngemuva kwesigaba se-hyperacaction.
20. Ikhuthaza ukubukeka kokuqala kwemibimbi, ngoba ishintsha ukwakheka kwe-collagen futhi inciphise ukuqina kwezicubu.
21. Kungadala izinguquko zomzimba kanye nomonakalo wezinso futhi kukwandise usayizi wawo.
22. Kuholela ekwandeni kwesilinganiso sama-radicals mahhala emzimbeni.
23. Kwangathi kungaphazamisa noma kulwenze buthakathaka ukwakheka kwe-DNA, engahle iholele ekuguqukeni kwezinguquko.
24. Kungaba nomthelela ongemuhle kumanyikwe ngokushintsha kokukhiqizwa kwe-insulin.
25. Kwandisa i-acidity yokudla okugayiwe.
26. Okungalungile kuthinta ukwakheka komchamo we-electrolytic.
27. Kungaba neqhaza ekuqaleni komdlavuza wesisu, i-rectum, amathumbu, amabele, namaqanda. Kuhlobene nokukhula komdlavuza webele, i-pancreas, i-bile ducts, i-gall bladder kanye namaphaphu. Ushukela wondla amaseli womdlavuza.
28. Kubangela ukungasebenzi kahle kwamasosha omzimba.
29. Ukhuthaza ukukhula kwamagciwane, imvubelo kanye nokuvela kwezifo zokukhunta. Ukwephulwa kokulinganisela kwabo emzimbeni kuholela ezifweni ezivame ukubangelwa ukungatheleleki kokuqina komzimba.
30. Iphazamisa ukumuncwa futhi iphazamise ukumuncwa kwamaprotheni. Kungashintsha ukwakheka kweprotheni futhi kuphazamise izinqubo zamaprotheni emzimbeni.
31. Kungadala ikhanda kanye ne-migraine futhi.
32. Yehlisa ukuqina kwemithambo yegazi, okungaholela ekulimaleni.
33. Kunganciphisa ukuqina kwezicubu futhi kukhubaze ukusebenza kwabo.
34. Kungadala i-emphysema.
35. Inikeza ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis.
36. Ungasebenza ukubangela ukuthuthukiswa komzimba wokudla.
37. Kungadala i-appendicitis futhi kuvuse ukukhukhumala kwe-appendicitis engapheli.
38. Ithinta kabi umsebenzi wokusebenza kwama-enzyme, uyinciphisa.
39. Kwandisa amathuba okukhula kwemithambo ye-varicose.
40. Kunganciphisa ukukhiqizwa kwama-hormone okukhula. Ukudala ukungalingani kwe-hormonal, okungaholela ekwandeni kwe-estrogen (i-hormone yabesifazane) emadodeni.
41. Umbono ukhubazekile, ungadala ikati kanye ne-myopia.
42. Ibangela ukwakheka kwamagallongo.
43. Kungadala i-toxosis ngesikhathi sokukhulelwa.
44. Iphula inqubo ye-metabolic emzimbeni, enomthelela ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela.
45. Iphazamisa ukusebenza okujwayelekile kwamathumbu. Kungadala izifo zepheshana emathunjini futhi kukwenyuse amathuba okuba nesifo sokuqina kwesibindi.
46. ​​kungaholela ekwakhiweni kwezifo zamathambo nezinye izifo ze-autoimmune, ezinjenge-asthma ne-sclerosis eminingi.
47. Uyakwazi ukuvusa isifo sikaParkinson (ukwethuka kanye nokuphazamiseka kwezimoto).
48. Yandisa ubungozi besifo i-Alzheimer's (senile dementia).
49. Kubangela ukuba buthaka kwezinqubo zomzimba zomzimba.
50. Yehlisa amandla omzimba wokumelana nokutheleleka ngamagciwane.
51. Kubangela ukuhlaselwa kwe-asthma yomgogodla nokukhwehlela.
52. Yandisa ingozi yokuthola isifo senhliziyo futhi icabanga ukwenzeka kwezinye izifo zenhliziyo.
53. Isiza ukunciphisa ivithamini E.
54. Kungadala isiyezi.
55. Inani elikhulu loshukela libhubhisa amaprotheni.
56. Yandisa inani lamaseli wamafutha esibindini, okwenza amaseli wesibindi ahlukane. Okuholela ekwandeni kosayizi wesibindi.
57. Kubangela ukwakhiwa kukamanzi emzimbeni.
58. Uyakwazi ukwenza ama-tendon angabinaso isihlwathi.
59. Ngenxa yokunciphisa ukunakwa, kwehlisa amandla okufunda nokukhumbula imininingwane.
60. Uyakwazi ukudala ukudana nokudangala.
61. Kukhulisa ubungozi be-poliomyelitis.
62. Yandisa ukuqina kwe-serotonin ye-neurotransmitter.
63. Iphazamisa ukumuncwa kwezakhi zomzimba ngesikhathi sokugaya ukudla.
64. Kwandisa ukucindezela. Ngesikhathi sokuxineka, umzimba ukhulisa inani lamakhemikhali (ama-hormone okugcizelela - i-epinephrine, i-cortisol ne-adrenaline), umsebenzi okuwukulungiselela umzimba ukuhlasela noma ukundiza. Lawa ma-hormone afanayo nawo angadala imiphumela emibi - ukukhathazeka, ukufutheka okufishane, ukuguquka kwemizwelo okungazelelwe.
65. Ukwazi ukwandisa ubungozi bokukhula kwesisu.
66. Ukusetshenziswa ushukela ngokweqile ngesikhathi sokukhulelwa kungavusa ukuzalwa kwengane ekhuluphele noma kubangele ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
67.Ushukela ungadala ukomisa ezinganeni ezisanda kuzalwa.
68. Yehlisa umsebenzi we-adrenal gland.
69. Ushukela omningi ubangela ukuhlaselwa kwesithuthwane.
70. kubantu abakhuluphele, ushukela unyusa umfutho wegazi.
71. Yehlisa izinga lama-lipoprotein aphezulu kwabantu.
72. Kuholela ekwandeni kwesilonda se-peptic sesisu kanye ne-duodenum.
73. Kukhuthaza ukuvela kwama-hemorrhoids.
Ingabe uyakwazi ukudla amashubhu ayi-16 kashukela ocwengiweyo ngasikhathi sinye? Bese uphuza uhhafu welitha weCoca-Cola? Yile ndlela ushukela oncibilikisiwe ofana nalolu oqukethwe kulesi siphuzo.
Bheka izithombe. Kungaleso sizathu ukuthi ushukela kuma-cubes uqukethe kanjani uhlobo lwe-sweeteners eziphuzweni zethu ezijwayelekile namaswidi. Manje usuqonda ukulimala kashukela, ikakhulukazi ushukela oncibilikisiwe. Ukulimala kwayo akubonakali ngokushesha, futhi noshukela ongahlakazeki awubonwa.
Akunconyelwe ukuthi kudliwe ushukela ongaphezu kwe-1 kilogramu ushukela ngenyanga (amakhilogremu ayi-12 ngonyaka). Ngenkathi isilinganiso sokusetshenziswa okujwayelekile eRussia singama-80 kilos. Uma ucabanga ukuthi awudli kangako, bese wazi ukuthi ushukela utholakala cishe kuyo yonke imikhiqizo yokudla - kumvimba, i-vodka, i-ketchup, imayonesi kanye nokunye.
Ushukela ungomunye wemikhiqizo yokudla ebaluleke kakhulu esetshenziswa ngabapheki banamuhla bawo wonke amazwe nabantu. Kungezwa yonke indawo: kusuka kuma-donuts amnandi kuya ku. Kepha bekungenzeki njalo ...
E-Russia, ekuqaleni kwekhulu le-18, osokhemisi be-1 i-spool eyi-1 (ama-gramu ayi-4,266), okuyiwona abathengisa ushukela ngalezo zinsuku, bafuna i-ruble yonke! Futhi naphezu kweqiniso lokuthi ngaleso sikhathi kungenzeka ukuthi kuthengwe ngaphezulu kwe-5 kg ​​ye-caviar enosawoti noma ama-25 kg enyama yenkomo enhle nge-ruble ngayinye!
EYurophu, ngenxa “yezindawo zayo ezinoshukela”, izindleko zikashukela zaziphansi kakhulu, kodwa nalapha kuphela yizicukuthwane nabacebile abacebile kuphela abangakwazi ukuyikhokhela isikhathi eside.
Ngakolunye uhlangothi, ngemuva kwekhulu elilodwa kuphela (ekuqaleni kuka maphakathi nekhulu le-19), wonke umuntu waseYurophu wayengase akwazi ukukhokha isilinganiso samakhilogremu amabili kashukela ngonyaka. Manje, ukusetshenziswa minyaka yonke koshukela eYurophu cishe kufinyelele kuma-40 kg umuntu ngamunye, kanti e-USA leli nani selivele lisondele kuma-70 kg ngomuntu ngamunye. Futhi ushukela ushintshe okuningi ngalesi sikhathi ...
Kulezi zinsuku, iningi labantu lisebenzisa izinhlobo ezilandelayo zoshukela ekuphekeni:
umhlanga (ovela kumoba)
isundu (kusuka kumsoco wesundu - ukhukhunathi, usuku, njll.)
i-beetroot (kusuka kushukela we-beet)
imaple (kusuka ujusi kashukela ne-maple wesiliva)
isinambuzane (kusuka kwisidunu)
Ngaphezu kwalokho, uhlobo ngalunye lukashukela lungaba brown (olungachazwanga) noma lube mhlophe (elicwengekileyo, elicwengiweyo). Ngaphandle, mhlawumbe, i-beetroot, okuthi ngendlela engachazeki ngokuphelele inephunga elingajabulisi. Yize ngokuhlanza okuningana kufaneleka ukusetshenziswa kobucwebe futhi kuthengiswe kungahlanzwa ngokuphelele, okunika izizathu zokukubiza ngokuthi kungacoliswanga.
Ngendlela, ukucwilisa ushukela kungukuhlanzwa kwamakhristali ahlanzekile we-sucrose avela "kungasoshukela" (molasses, ushukela ovinjelwe, usawoti wamaminerali, amavithamini, izinto ze-gummy, i-molasses). Ngenxa yalokhu kuhlanzwa, kutholakala amakristalu amhlophe, lapho kungekho khona amaminerali kanye namavithamini.
Ngenxa yoshintsho olukhulu kangaka ekwakhiweni kwamakhemikhali komkhiqizo wokuqala, zonke izinhlobo zoshukela zingakwazi ukuhlukaniswa ngezigaba ezimbili:
ushukela onsundu (amabanga ahlukahlukene wokucwengisisa)
ushukela omhlophe (uhlanjululwe ngokuphelele)
Ekuqaleni, abantu babesebenzisa ushukela onsundu kuphela njengokudla (kwakungekho nje okunye). Kodwa-ke, ngokuthuthuka kwenqubekela phambili yesayensi nezobuchwepheshe, abantu abaningi ngokwengeziwe banikela ngokuthanda kwabo ushukela omhlophe, ngoba intengo yakhe eYurophu ngenxa yezizathu eziningana iphansi kaningana kunezindleko zikashukela onsundu.
Emazweni afudumele, ushukela onsundu usasetshenziswa ikakhulukazi - kancane ushukela, kepha futhi uwusizo kakhulu (empeleni, lo umehluko omkhulu phakathi koshukela omhlophe no-brown) ...
Okuqukethwe kwekhalori nokwakheka kwamakhemikhali ushukela
Ukwakheka kwamakhemikhali kashukela oshukela (ocolisisiwe) kuhluke kakhulu ekwakhekeni koshukela onsundu. Ushukela omhlophe uqukethe cishe ama-100% ama-carbohydrate, kuyilapho ushukela onsundu uqukethe amanani athile wokungahlanzeki, angahluka kakhulu ngokuya ngekhwalithi yemfuyo nokuphaka kwayo kokuzihlanza. Ngakho-ke, sikunikeza itafula lokuqhathanisa nezinhlobo eziningana zoshukela. Ngenxa yakhe, uzoqonda ukuthi ushukela ungahluka kanjani.
Ngakho-ke, okuqukethwe kwekhalori nokwakheka kwamakhemikhali kashukela:
Isikhombi Kuhlanjululwe I-White Granulated Ushukela
(kusuka kunoma yikuphi okuluhlaza) Umhlanga onsundu
Okuqukethwe kwekhalori, kcal 399 398 396
Ama-carbohydrate, gr. 99,8 99,6 96
Amaprotheni, gr. 0 0 0,68
Amafutha, gr. 0 0 1,03
I-calcium calcium 3 15-22 62,7
Iphosphorus, mg. - 3-3,9 22,3
Magnesium, mg. - 4-11 117,4
I-Zinc, mg. - akucacisiwe 0,594
I-Sodium, mg 1 akucacisiwe akucacisiwe
Potassium, mg. 3 40-100 331
Iron, mg. - 1,2-1,8 2,05
Ingabe ushukela webhitroli ohlanziwe uhlukile kushukela omoba ocolisisiwe?
Amakhemikhali, cha. Yize kunjalo, omunye umuntu uzosho ukuthi ushukela womoba unokunambitheka okuthe xaxa, okumnandi nokuthambile, kepha empeleni konke lokhu kumane nje kuyimibono engasho lutho kanye nemibono engafani noshukela othile. Uma lowo “mhambisi” onjalo eqhathanisa izinhlobo zikashukela angazazi, cishe akakwazi ukuhlukanisa ushukela we-beet nomhlanga, isundu, imephu noma isilo.
Isimo sikashukela ngosuku
Kwamukelwa ngokubanzi emibuthanweni yesayensi ukuthi isilinganiso sikashukela ngosuku kubantu abadala abaningi abanempilo singama-gramu ayi-50 (amathisipuni ayi-10). Kodwa, "ngokubukezwa" ngakunye kwale nkinga, inqubo iyancipha. Ushukela omhlophe ocoliweyo, noma kunjalo, ushukela ongafakwanga ushukela, umzimba wethu awuludingi.
Okwamanje, lapho ubheka nje kancane kungabonakala sengathi into ejwayelekile nsuku zonke "inamandla amaningi," ngoba siphuza izinkomishi ezi-1 zewathi noma ikofi, sidla amathisipuni kashukela aphelele angama-5-6. Noma kunjalo, kukhona "izingibe" ezimbili:
1. Namuhla, ushukela ocoliweyo ungezwa cishe kuyo yonke imikhiqizo yokudla enhlobonhlobo ekhiqizwa kahle.
2. Izinga lokusetshenziswa ushukela ngosuku alibheki amakristalu kuphela, kepha futhi nanoma yikuphi okunye ushukela olulula (i-fructose yezithelo, i-lactose ebisini, ushukela oju, imaltose evela kubhiya nesinkwa, njll.)
Ngakho-ke, ngokomqondo, ushukela ocoliweyo (ama-carbohydrate angenamsebenzi ngaphandle kwamaminerali namavithamini) kufanele angabandakanywa ekudleni ngokuphelele futhi ngokuphelele.
Kodwa-ke, siyaqonda ukuthi iqiniso lesimanje alilungile: kunzima kakhulu iningi lethu ukwenqaba ama-pastries amnandi, ama-roll, i-ketchup, ushokoledi neminye imikhiqizo equkethe ushukela ocolisisiwe. Ngakho-ke, kufanele sizame ukunciphisa kakhulu noma ngisho nokukhipha ushukela kwifomu ecacile, okungukuthi, ungangezi itiye, ushizi we-cottage, i-eggnog, ama-pancake, njll.
Futhi okunye sekuvele - ngangokunokwenzeka ...
Izinzuzo nokulimala ushukela (onsundu nokumhlophe)
Okokuqala, kumele kushiwo ukuthi izinzuzo nokulimala ushukela emzimbeni womuntu namanje akuqondakali ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi kusasa kusasa uhlobo oluthile locwaningo lungaqhutshwa oluphikisa konke okushiwo ososayensi banamuhla ngezingozi nangezinto eziwusizo zamakristali kashukela.
Ngakolunye uhlangothi, eminye imiphumela yokuphuza ushukela ngokweqile ingahlulelwa ngaphandle kocwaningo lwesayensi - kusuka kokwethu. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ukulimala okusobala koshukela kuboniswa eqinisweni lokuthi:
kuphazamisa ukusebenza kwe-lipid emzimbeni, okuholela ekuholeleni iqoqo lamaphawundi angeziwe kanye ne-atherossteosis (ikakhulukazi ngokweqile njalo kokudla ushukela nsuku zonke)
kwandisa iphango futhi kuvuse isifiso sokudla okunye (ngenxa yokuxhuma okubukhali kushukela wegazi)
kukhuphula ushukela wegazi (lokhu kwaziwa kakhulu kwabanesifo sikashukela)
ifinyelela i-calcium emathanjeni, ngoba iyi-calcium esetshenziselwa ukuguqula umphumela we-oxidizing kashukela egazini Ph
lapho ihlukunyezwa, yehlisa ukumelana komzimba kwamagciwane namagciwane (ikakhulukazi ngokuhlanganiswa namafutha - kumakhekhe, namakhekhe, ushokoledi, njll.)
kukhulisa futhi kwandise ukucindezela (kulokhu, umphumela kashukela emzimbeni ufana kakhulu nomthelela wotshwala - okokuqala "uphumuza" umzimba, bese ulushaya ngamandla)
kudala indawo evumayo ye-acid yokuphindaphindeka kwamagciwane emgodini womlomo, okuthi kwelinye izinga lobuvila kuholele ezinkingeni zamazinyo nasezinsini.
idinga amavithamini amaningi we-B ukuthathwa kwayo, futhi ngokusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi idonsa umzimba, okuholela ezinkingeni ezahlukahlukene zezempilo (ukonakala kwesikhumba, ukugaya ukudla, ukuchitheka, ukulimala kohlelo lwenhliziyo, njll.)
Kumele kuqashelwe ukuthi zonke izinto "eziyingozi" kuhlu lwethu, ngaphandle kwalezi ezilandelayo, azikhathaleli ushukela omhlophe ocwengekile kuphela, kepha futhi onsundu azicoliswanga. Ngoba isizathu esiyinhloko cishe sayo yonke imiphumela emibi yokudla ushukela okweqile komzimba ukwanda okubangelwa ushukela wegazi.
Kodwa-ke, ngasikhathi sinye, ushukela ongafakwanga ulimaza kakhulu umzimba, ngoba uqukethe inani elithile (kwesinye isikhathi ngisho nelibaluleke kakhulu) lamaminerali kanye namavithamini anciphisa kakhulu umonakalo odalwa wukugcwala kweglucose. Ngaphezu kwalokho, izinzuzo nokulimala ushukela womoba kuvame ukulingana. Ngakho-ke, uma kungenzeka, thenga futhi udle ushukela ongafakwanga onsundu ngensalela ephezulu yokungcola kwe-Vitamin-mineral.
Ngokuqondene nezakhiwo ezinoshukela, ngaphezu kokugcwala umzimba ngamavithamini namaminerali athile, lo mkhiqizo ungazuzisa umuntu kulezi zimo ezilandelayo (yiqiniso, ngokusetshenziswa ngokulinganisela):
phambi kwezifo zesibindi sesibonda (esithathwe ngokunconywa kukadokotela)
ekucindezelekeni okuphezulu kwengqondo nangokomzimba
uma kunesidingo, yiba onikelayo ngegazi (ngokushesha ngaphambi kokunikela ngegazi)
Empeleni yilokho kuphela. Manje usunayo yonke imininingwane oyidingayo ukuze uthathe isinqumo sokuthi ushukela ulungile kuwe noma mubi.
Kodwa-ke, ushukela usheshe kakhulu ukuvala ngale ndaba. Ngemuva kwakho konke, sisadinga ukuthola ukuthi ungahlukanisa kanjani ushukela ongachazwanga noshukela ohlanjululwayo, nokuthi ngabe kufanelekile ukusebenzisa izikhala zikashukela ...
Ushukela onsundu: kanjani ukwahlukanisa inkohliso?
Kunombono (ngeshwa, eyiqiniso) wokuthi ushukela ongachazwanga wemvelo awuvamile kakhulu emakethe yasekhaya. Imvamisa, ushukela ocwengiweyo “onothisiwe” uthengiswa esikhundleni salokho. Kodwa-ke, abanye bayaqiniseka: akunakwenzeka ukwahlukanisa amanga!
Futhi into edabukisa kunazo zonke ukuthi, baqinisile ngxenye, ngoba ngokuqondile esitolo ngeke basebenze ukuhlukanisa ushukela ongafakwanga noshukela ocwengekile.
Kepha ungabheka ubunjalo bomkhiqizo ekhaya! Ukuze wenze lokhu, kufanele wazi ukuthi:
Uma ubuza umuntu ukuthi: “Ushukela ulimaza ini?”, Iningi labantu lizophendula ngokuthi: “Kulimaza amazinyo.” Abantu abahola impilo enempilo, badla ngendlela efanele, ngokulandelana, bazosho ukuthi ushukela uyingozi kulesi sibalo. Mhlawumbe othile uzosikhumbula isifo sikashukela. Kepha empeleni, umuntu wazi okuncane kakhulu ngoshukela kunokufanele ukwazi.
I-Fructose ibola kumaseli ibe ama-carbohydrate alula, okuthi, lapho kungekho khona isidingo ngokushesha, ama-molecule amanoni aqala ukwakha. Lezi yizitolo zamandla ezihlala isikhathi eside futhi ezingabizi kakhulu emzimbeni. Ziyafana nokudla okusemathinini, okumele kusetshenziswe kuzona kuthinta yonke indlela yokuphendula.
IGlucose isekela isibindi emsebenzini wayo ukwenza ubuthi obuhlukahlukene. Ngalesi sizathu, ushukela uvame ukujova egazini ngokudakwa okuhlukahlukene.
Futhi i-glucose ivuselela ukukhiqizwa kwe-serotonin emzimbeni. Leli yihomoni yenjabulo, ukwanda kokuxineka okuthi egazini kuholele ekuguqukeni kwezimo zemizwa kanye nokwenzeka kwesimo ngokomzwelo.Kungakho izinzuzo zikashukela zemood yethu zisobala kakhulu - zisinika injabulo enkulu.
Kepha lolu kuphela uhlangothi olukhanyayo lwethonya loshukela emzimbeni womuntu. Isikhathi sokubheka ubumnyama.
Ushukela uyisitha esibi esidonsela ukunakwa okuningi, kepha kulokhu akukho okuyingozi. Ngakho-ke iyini yonke ingozi yayo?
Kunezinhlobo ezimbili zokunukisa: i-glucose ne-fructose. I-glucose kuphela ewusizo emzimbeni, isatshalaliswa ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili kuyo yonke ingqamuzana emzimbeni ukuze iphenduke amandla, bese kuthi namaphesenti angamashumi amabili asele esibindini, ibuye iguqulwe ibe namandla. I-glucose ikhishwa ngokuphelele emzimbeni. Futhi kukhona i-fructose, ehlala ikakhulukazi esibindini futhi yakha amanoni angaphansi kwe-subcutaneous. I-Fructose ayitholakali ekudleni okusetshenzwe kuphela, kepha futhi nasezithelo nemifino. Kepha ezitshalweni zezitshalo, okuqukethwe yi-fructose kuphansi kakhulu ukulimaza umzimba womuntu.
Ososayensi bakufakazele ukuthi ushukela uxhasa amaseli womdlavuza Amanye amangqamuzana omdlavuza aze adle kakhulu ushukela, okungukuthi, ukusetshenziswa njalo koshukela olukhulu kusiza amaseli womdlavuza ukuba akhule.
Amazinga Ushukela kanye Nesifo Sikashukela
"Ushukela egazini" yigama elijwayelekile lesilinganiso esilinganiselwe seglue esincibilikisiwe ku-plasma ejikeleza emithanjeni.
Eqinisweni, inani eliphakeme le-glucose engalapheki ukubonakaliswa okuyinhloko kwesifo sikashukela - i-pathology. Lesi sifo, empeleni, sinezindlela eziyinkimbinkimbi zokuthuthuka nezimpawu ezihlanganisiwe, kepha inkomba enkulu “ushukela ophakeme”.
Ukuqapha amazinga e-carbohydrate kungenye yezinto eziphambili zokwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela.
Ingxenye yesibili (uma ikhonjiswa ngodokotela). - i-hormone elawula amazinga kashukela. Esikhathini sikashukela, i-insulin emzimbeni noma eyanele, noma amaseli awasabeli kahle.
Kokubili ushukela we-plasma ophakeme futhi ophansi akafiseleki ngokulinganayo emzimbeni, kepha uma ukuswelakala kweglucose kungaqedwa kalula ezimweni eziningi, khona-ke izinga eliphakeme lama-carbohydrate liyingozi enkulu.
Kwesinye isikhathi, kudingeka imishanguzo ejwayelekile yokulungisa i-hyperglycemia: abantu abanesifo sikashukela esithuthukisiwe benza imijovo ye-insulin engapheli: lokhu kuqeda ukungaphezulu kwe-carbohydrate. Esigabeni sokuqala, ungasusa ngosizo nokulungiswa kokuzivocavoca komzimba.
Ngakho-ke ungadla ushukela ongakanani ngosuku?
Kunokuthile okufanele sikugubhe: awudingi ukuzizwa unecala ngaso sonke isikhathi lapho udla ushukela ongeziwe. Kepha kufanele uhlale usesikhathini nokusebenzisa kwakho futhi wenze konke okusemandleni ukuze ungeqi izinkomba ezilandelayo:
Amakhalori ayi-100 ngosuku abesifazane (cishe amathisipuni ayi-6, noma amagremu angama-25)
Amakhalori ayi-150 ngosuku amadoda (cishe amathisipuni ayi-9, noma amagremu angama-36)
Kusho ukuthini lokhu? Gxila kuma-Snickers wonke ayi-1 noma izingcezu ezi-7-8 zamakhukhi e-Oreo. Kepha Qaphela ukuthi asisho ukuthi kufanele ungeze ama-Snickers noma ama-Oreo ekudleni kwakho kwansuku zonke. Lezi zibonelo zimane zikhombisa inani eliphelele ngosuku ongafuna ukulilinganisela. Kepha khumbula: ushukela ongeziwe ufihlwe ezindaweni eziningi ezingalindelekile, njengesobho ne-pizza.
Ngenkathi izinga eliphakathi lokuphuza ushukela e-United States lingase lehlise (ngo-1999-2000 lalicishe libe ngu-400 kcal / usuku bese lehla laya ku-300 kcal / ngosuku ngo-2007-2009), namanje liphezulu kakhulu. Futhi, ngokweqiniso, lokhu kuyisilinganiso, futhi amanani aphakathi amanga. Abanye abantu basebenzisa ushukela omncane, kanti abanye. okuningi.
Kepha ake sithi awuzithandi izinombolo ezilingana nawo wonke umuntu. Futhi awufuni ukuphatha isethi ephelele yobukhulu obuhlukahlukene nawe usuku lonke noma ukhathazeke ngokuthi mangaki amagremu kashukela owadlile. Uma kunjalo, nansi indlela elula kakhulu yokusebenzisa amandla ayo. Kususelwa kwimodeli yePyramid endala yoMhlahlandlela Wokudla eyasungulwa ngonyaka we-1992 futhi yathathelwa indawo ngo-2005 yi-MyPyramid, eyagcina ithathelwe indawo uhlelo olusetshenziswa uhulumeni wase-US namuhla.
Isisekelo sephiramidi elinoshukela elinempilo sakhiwe ngemifino nezithelo: azigcini nje ngokugcwala, kepha futhi zinikeza umzimba nge-fiber, amavithamini, amaminerali kanye nama-phytochemicals (i-biologically esebenzayo etholakala ezitshalweni, ezinye zazo zilungele impilo yethu), ngaphezu koshukela.Ungafaka nobisi lonke lapha. Inani elincane likashukela wemvelo otholakala esinkwa nalo alibhekwa njengelengeziwe, kepha ushukela ovame ukuhlanganiswa ekukhiqizeni e-USA uthathwa njengalolo.
Ngokuqondene namajusi ezithelo, uju ne-maple syrup, wonke abhekisela kushukela ongeziwe, kanye nesiraphu yommbila wefreyimu ephezulu.
Ushukela = utshwala
Izici ezintathu zesine zemiphumela emibi yotshwala emzimbeni ziyafana noshukela. Kubandakanya umphumela kumangqamuzana obuchopho. Ushukela uthinta ingxenye yobuchopho ebhekele indlala nokukhathala. Ngakho-ke, umuntu odla ushukela omningi kakhulu angahlangabezana nendlala nokucindezelwa okungapheli, ubuthakathaka, ukuntuleka kokulala. Ushukela futhi uthinta nengcindezi, ukusebenza kwemishini yokusebenza kwenhliziyo, njalonjalo.
Eqinisweni, ushukela uwumkhiqizo otholakala yonke indawo, ngakho-ke umuntu akakwazi ukukukhipha ngokuphelele ekudleni, kepha ungalawula ukusetshenziswa koshukela omsulwa, ubheke okuqukethwe ushukela emkhiqizweni futhi, impela, qaphela kakhulu ngamaswidi, namakhekhe nakho konke ukudla okuphezulu okuqukethwe ushukela.
I-metabolism yama-carbohydrate emzimbeni
Umsebenzi oyinhloko we-glucose emzimbeni ukuhlinzeka amaseli nezicubu zamandla ngezinqubo ezibalulekile zomzimba.
Kukholelwa ukuthi amangqamuzana ezinzwa adinga i-glucose emsulwa kunazo zonke, kodwa empeleni, alukho uhlelo lomzimba olungayenza ngaphandle kwama-carbohydrate.
Sifaka kuhlu izakhi ezibaluleke kakhulu zenqubo yokudla okunoshukela emzimbeni womuntu:
I-glucose ingena emithanjeni yegazi iphuma emathunjini futhi (esibindini kukhona indawo yokugcina i-polysaccharide, esetshenziswa njengoba kudingeka),
Uhlelo lokujikeleza luphethe ushukela emzimbeni wonke - ngalokho, amaseli nezicubu kunikezwa amandla,
Ukufakwa kweglucose egazini kudinga ukuba khona kwe-insulin, ekhiqizwa amaseli β-,
Ngemuva kokudla, amazinga kashukela akhuphuka kubo bonke abantu - kodwa kubantu abaphilile lokhu kwanda akunakubaluleka futhi akuhlali isikhathi eside.
Umzimba ulawula njalo ukugxilwa kwe-glucose egazini, kugcina i-homeostasis (ibhalansi). Uma ukulingana kungatholakali, futhi ukwehluleka okunjalo kwenzeka njalo, ama-endocrinologists akhuluma ngokuba khona kwesifo sikashukela - i-pathology enzima yezinqubo ze-metabolic.
Kungani kubalulekile ukwazi izinga lakho loshukela
E-Russia, ushukela wegazi ulinganiswa ngamamilimitha ngelitha (mmol / l). E-Europe nase-USA, izilinganiso zenziwa kuma-milligrams nge-desilita (mg / dts). Akunzima ukuhumusha izinkomba ezithile kwezinye: I-1 mmol / l ingu-18 mg / dl.
Izinga likashukela kudala laziwa -3.9-5 mmol / l
Ngemuva kokudla ihora, lezi zibalo ziphakeme kancane (5.1-5.3). Ebantwini abaphilile, okuqukethwe i-glucose kuyahluka ngaphakathi kwale mikhawulo, kepha kwesinye isikhathi (lapho umuntu edla kakhulu ngama-carbohydrate asheshayo) angafika ku-7 mmol / l. Kuma-diabetes, izinkomba ezingenhla kwe-7 kuya ku-10 zithathwa njengezinga elamukelekayo. Ngamanani anjalo, ukwelashwa okukhethekile akuqokwa njalo, kukhawulelwe ekudleni. Uma izinga lingaphezulu kwe-10, odokotela baphakamisa umbuzo wokulungiswa kwezidakamizwa.
Ukuphuma kwe-glucose kanye nokwelashwa kwe-insulin yimiphumela engenakugwenywa yesifo sikashukela esigabeni esithuthukile salesi sifo. Kuze kube manje, umuthi awukwazi ukwelapha ushukela ngokuphelele. Kodwa-ke, uma ulandela ukudla, ubhekisisa njalo futhi ungaphuthelwa imijovo, ungazigwema izimpawu ezinzima ze-hyperglycemia nezinkinga ezibangelwa amazinga kashukela angenhla.
Inkolelo ethandwayo yokuthi isifo sikashukela singumphumela wokusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi akulona iqiniso ngokuphelele, kodwa ngokuqinisekile iqukethe okusanhlamvu okunengqondo.
Njengoba ushukela ukhuphuka kancane, i-insulin nayo ikhiqizwa kancane. Kepha lapho, ngenxa yenani elikhulu lokudla okune-carbohydrate amaningi, inani elilinganisayo lamangqamuzana kashukela engena egazini, umzimba uphendula ngokwanda kwe-insulin ukuze kwehle ushukela.
Uma ushukela nokuhlaselwa kwe-insulin kuqhubeka njalo iminyaka eminingana, ama-pancreas ayovele aphele. Umzimba uzokhipha i-insulin enesici noma inani elincane le-hormone elingakwazi ukubhekana noshukela ongena emzimbeni. Izimpawu eziphambili ze-hyperglycemia (ubuthi bomzimba ngemikhiqizo ye-carbohydrate metabolism).
Ngegama elithi “ushukela” abaningi basheshe bacabange impuphu emhlophe emhlophe esiyifaka ekhofi. Kodwa-ke, ushukela wethebula, noma i-sucrose, uhlobo olulodwa nje lukashukela olusetshenziswa ekudleni.
Ama-Sugars angama-carbohydrate asezingeni eliphansi, izinto eziphilayo ezinesakhiwo esifanayo. Kunezinhlobo eziningi zoshukela: ushukela, i-fructose, i-galactose nabanye. Okungenani ngamanani amancane, ushukela ohlukile ukhona ekudleni okuningi.
Elinye igama lamashukela aphansi wesisindo ngama-carbohydrate. Leli qembu lifaka futhi:
isitashi (i-oligosaccharide etholakala kumazambane, ilayisi nokunye ukudla),
i-fiber yokudla (okusanhlamvu okuphelele, ama-legamu, imifino, izithelo namajikijolo),
izinto ezifana ne-chitin, ezakha igobolondo le-crustacean, noma i-cellulose, enamagxolo esihlahla.
Ekugcineni, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi aphulwe abe ama-carbohydrate alula emzimbeni, futhi umehluko wonke phakathi kwawo uyinkimbinkimbi nesivinini sokumunca. Isibonelo, i-sucrose - i-disaccharide equkethe i-fructose ne-glucose, igaywa ngokushesha kunefayibha yokudla - ingxube yama-polysaccharides ne-lignin.
Ngakho-ke, uma udla ukudla okuphezulu ku-fiber yokudla, kuzokumba isikhathi eside, izinga leglucose yakho lizokhuphuka kancane, futhi umuzwa wakho wokugcwala uzohlala isikhathi eside.
Lokhu yilokhu okuhlukanisa ushukela omncane, isibonelo, i-buckwheat, kusuka kumakhabethe wekhokhonathi asheshayo. Eqinisweni, zihlukaniswe ngama-monosaccharides afanayo, kepha inani eliphansi lokufakwa (ngaphezu kwefayibha namavithamini) kwenza i-buckwheat ibe lusizo kakhulu.
Kuzokwenzekani uma ungadli ushukela
Yilokho kuphela. Cabanga nje lo mdwebo. Uma isisekelo sephiramidi sakho “soshukela” sibanzi, khona-ke ingcosana encane kashukela ongeziwe ngeke ibangele ukuba iwe. Kuphela lapho ushukela omningi ekudleni kwakho uqhamuka neziphuzo ezithambile, amaswidi, amabhisikidi, okusanhlamvu kwasekuseni, nokunye okunjalo, lapho ungaphanjaniswa yiphiramidi kanye nempilo yakho.
Njengoba wazi, ayikho imikhiqizo eyingozi noma ebonakalayo ebonakalayo. Futhi ushukela awukho umehluko. Unezinzuzo nezingozi zakhe.
● Odokotela basePoland benza ucwaningo oluzimele, ngenxa yalokho bathola iqiniso elilandelayo: umzimba womuntu ongenawo ushukela ngeke uqhubeke isikhathi eside. Ushukela wenza kusebenze ukugeleza kwegazi ebuchosheni nasentanjeni yomgogodla, futhi uma kwenzeka kwenqatshwa ushukela ngokuphelele, kwenzeka izinguquko ze-sclerotic.
● Ososayensi bathole ukuthi kushukela okunciphisa kakhulu ingozi yokulimala kwe-plaque emithanjeni yegazi, ngakhoke kuvimbela i-thrombosis.
● Isifo samathambo esimnandi asivamisile ukwedlula abantu abenqaba ukuzelapha ekwelapheni izinyo elimnandi.
● Ushukela usiza ukuthuthukisa ukusebenza kwesibindi nobubanzi. Kungakho abantu abanezifo zalezi zitho bavame ukunconywa ukudla okuqukethe amaswidi aphezulu.
● Impoqo emnandi isibalo. Ushukela uwumkhiqizo wekhalori ophakeme kakhulu, kepha awunawo cishe noma yimiphi amavithamini, i-fiber kanye namaminerali. Ngakho-ke, ngeke ugcwale ushukela, futhi ukuze udle, udinga ukudla okunye. Futhi lawa amanye amakhalori. Ngaphezu kwalokho, ushukela uvame ukungena emzimbeni uhlanganiswa namafutha - ngesimo samakhekhe namakhekhe. Futhi lokhu futhi akungezi ukuvumelana.
● Ushukela ocolisisiwe, ngokungafani nama-carbohydrate ayinkimbinkimbi afana namazambane, udonswa ngokushesha ngumzimba futhi ubangele ukwanda ngokushesha kweglucose yegazi. IGlucose “ngophethiloli” odingekayo ukuze izicubu, izitho zomzimba namaseli omzimba womuntu zisebenze.Kodwa uma uphila impilo yokuhlala futhi umzimba awunaso isikhathi sokusebenzisa ngokushesha inani elinjalo likaphethiloli, ithumela ushukela omningi kudepho elinamafutha. Futhi lokhu akugcini nje ngamakhilogremu namasentimitha, kodwa nomthwalo kumanyikwe.
● Ushukela uyingozi emazinyweni, unikela kuma-caries, yize kungenjalo ngqo. Isimbangela esiyinhloko kwizimbobo ezisezinyeni yi-plaque, ifilimu encane yama-bacterium, izinhlayiya zokudla namathe. Lapho ihlanganiswa ne-plaque, ushukela unyusa izinga le-acidity emlonyeni. I-Acid corrodes enamel yezinyo kanye nokubola kwamazinyo kuqala.
Malini ukulengiswa kumagremu?
Ngakho-ke yini okufanele uyenze? Phonsa isikhwama sikashukela esithengiselwe ikusasa, noma, ngakolunye uhlangothi, ufafaze ngomusa itiye nekhofi noshukela ocoliweyo? Eqinisweni, udinga nje ukuhambisana nesilinganiso.
Izazi zezempilo zilinganisela ukuthi umuntu omdala angadla cishe amagremu angama-60 kashukela ngosuku (cishe izingcezu eziyi-15 zoshukela olucwengekile noma izipuni eziyi-12 zikashukela owakhiwe). Noma yini edlula le nkambiso isivele isilimazile. Kubukeka sengathi izingcezu eziyi-15 ziningi, kepha izinyo elimnandi akufanele lijabule ngaphambi kwesikhathi. Ngemuva kwakho konke, ushukela awutholakali esitsheni sikashukela kuphela, kepha nakwezinye izindawo. Zigwebe:
● Amakhukhi amathathu we-oatmeal - ushukela ongu-20 g.
● Ibha yamashokolethi ayikhulu nanhlanu - 60 g ushukela.
● Ingilazi kashukela omnandi - 30 g ushukela.
● I-Apple - 10 g ushukela.
● Ingilazi yejusi yewolintshi - 20 g kashukela.
Kodwa-ke, akufanele ucabange ukuthi umzimba awunandaba ukuthi udla i-apula noma izingcezu ezimbili noma ezintathu zikashukela. Kunezinhlobo ezimbili kashukela - zangaphakathi nezangaphandle. Esokuqala sitholakala ngezithelo, okusanhlamvu nemifino emnandi, njengamabhungane kanye izaqathi. Njengoba ushukela kuzo “ugcwele” ku-fiber, kuphela inani elilinganiselwe lazo eligcinwa emzimbeni wethu. Ngaphezu kwalokho, le ushukela iza namavithamini kanye namaminerali. Ushukela wangaphandle ungolunye udaba. Zitholakala uju, iziphuzo ezimnandi, amakhekhe namaswidi. Yilawa ushukela owonakalisa amazinyo nesibalo.
Kungani sithanda ushukela kangaka
Amangqamuzana kashukela ahlangana nama-receptors olimini atshela ubuchopho ukuthi udla okuthile okumnandi ngempela.
Ushukela ubonwa ngumzimba wethu njengomkhiqizo omuhle, ngoba uthakwa ngokushesha futhi unikeza amakhalori anele. Ezikhathini ezilambile, lokhu kubalulekile ukuze usinde, ngakho-ke ukunambitheka okumnandi kuqashelwa ngumzimba njengento emnandi.
Ngaphezu kwalokho, emvelweni, ushukela omningi utholakala ezithelo, ngaphezu kwalokho, ugcwele amavithamini, amaminerali namandla.
Kodwa-ke, akubona bonke abantu abathanda ushukela ngokulinganayo. Abanye bayidla ngemithamo emincane - kwanele ukuba badle i-sweetie eyodwa netiye ukuze baneliswe. Abanye abanalo ibhokisi lonke lama-donuts amnandi.
Ukuthanda amaswidi kuya ngezinto eziningi:
ngeminyaka (izingane zithanda amaswidi kakhulu futhi zizama ukugwema ukudla okubabayo),
kusuka kumikhuba yokudla oyifundile ebuntwaneni,
kusuka kuzimpawu zofuzo.
Ngombala omhlophe noma omhlophe?
Abathandi bokudla bakholelwa ukuthi ushukela onsundu unokunambitheka okubonakalayo. Bazehlukanisa futhi ibe yizinhlobonhlobo, beqiniseka ukuthi uhlobo olulodwa lukashukela onsundu lufanelekela kakhulu ekubhaka, enye itiye noma ikofi, kanti okwesithathu kube amasaladi ezithelo. Eqinisweni, kunzima kakhulu ukuhlukanisa phakathi kwalawa ma-nuances flavour.
Into eyodwa icacile, lapho ushukela omnyama umnyama kakhulu, ukungcola okuthe xaxa okuvela kuwo ujusi wezitshalo. Kuthiwa yilezi ezingcolile ezinikeza ushukela ngenani elithile lezinto zokulandela umkhondo namavithamini. Eqinisweni, inani lezakhamzimba kushukela onsundu lincane kakhulu ukuthi ungakwazi ukulibiza ngokuthi umkhiqizo wokudla. Kepha akubizi kakhulu kunakumhlophe. Iqiniso ngukuthi ushukela onsundu wenziwa kuphela umoba futhi awukhiqizwa ezweni lethu.
Kepha ushukela ojwayelekile we-beet ungaba mhlophe noma ube ophuzi kancane. Okokugcina kuhlanzwe kabi, okusho ukuthi amavithamini agcinwa kuwo.
Ingabe kukhona okungathathelwa indawo?
Ukuphela kwabantu abangakwazi ukwenza ngaphandle kwama-sweeteners ngabantu abanesifo sikashukela.Kepha noma ngabe wonke umuntu edinga ama-sweeteners, izazi zokudla zisakungabaza.
Ama-sweeteners ayizithasiselo zokudla okunempilo. Iningi lazo limnandi izikhathi eziningi kunoshukela, kepha ikhalori elincane. Kodwa-ke, kuvela ukuthi lokhu akusho ukuthi bonke abazisebenzisayo bazoba kancane. Ososayensi benze ucwaningo oluthokozisayo kumagundane. Babedla ama-yogurt amagundane aqukethe ushukela wemvelo, kanti abanye babedla i-yogurt nge-esikhundleni sokufakelwa. Ngenxa yalokhu kuhlolwa, isifiso sokudla kwamagundane, okubandakanya ukufaka esikhundleni sikashukela ekudleni kwabo, kukhule kakhulu futhi baba namafutha. Kuliqiniso, akukaze kufakazelwe ukuthi ukufakwa esikhundleni kungenza umphumela ofanayo kubantu.
Ukukhathazeka mayelana ne-sweeteners akugcini nje ngokudla okunempilo, kodwa futhi nodokotela. Abanye odokotela bakholelwa ukuthi amanye ama-sweeteners angadala ukwehluleka kwezinso futhi yi-carcinogenic. Kodwa-ke, zonke lezi zitatimende zahlala ziqageli.
Isakhamuzi esijwayelekile saseMelika sithola cishe amagremu ayi-190 kashukela ngosuku ngokudla. Lokhu kungaphezu kokwejwayelekile kwesimo esivumelekile kathathu. Ngokuqondene neRussia eyisilinganiso, udla kuphela ama-100 g ngosuku efomu elihlanzekile (isihlabathi futhi elicwengekile), eledlula inani lesikhathi "kuphela" esisodwa nesigamu.
Ukutadisha 1. Umphumela wama-carbohydrate, ushukela kanye ne-insulin osindayo
Ocwaningweni olwenziwe yiCalorie for Calorie, Ukubuyiswa Kwamafutha Okudla Komphumela Wokulahleka Kwamafutha Omzimba Angaphezulu Kokuvinjezelwa Kwe-carbohydrate kubantu abanokukhulupha ngokweqile. Ngo-2015, uDkt Kevin Hall wazama ukudla kabili, omunye ephansi ngamafutha futhi omunye ephansi kuma-carbohydrate, ukuthola ukuthi yini esebenza kangcono.
Ngesikhathi sokufunda, ababambiqhaza abangu-19 bachitha amasonto amabili ekudleni ngakunye. Ukuphumula phakathi kokudla bekungamaviki ama-2-5 wokudla okujwayelekile.
Isifundo 2. Ushukela Ngesikhathi Sokudla
Olunye ucwaningo yimiphumela ye-Metabolic nokuziphatha kokudla okuphezulu kakhulu ngesikhathi sokunciphisa umzimba. kukhombisile ukuthi uma kubhekwa inqubo esekhalori, ukudla ushukela akubalulekile kakhulu. Lolu cwaningo lwalubandakanya abesifazane abangama-44 ngaphezulu kweminyaka engama-40.
Emavikini ayisithupha, bonke ababambe iqhaza kulingo balandela ukudla okune-kilojoule encane: badla cishe ama-1,350 kcal ngosuku, ama-11% kilojoule ephelele ngohlobo lwamafutha, 19% ngesimo samaprotheni no-71% ​​ngendlela yama-carbohydrate.
Ngaphezu kwalokho, uhhafu wezifundo wadla inani elikhulu le-sucrose (i-43% yenani eliphelele lamandla), kwathi enye ingxenye - kwaba ngu-4% kuphela.
Ngenxa yalokhu, abesifazane abavela kuwo womabili amaqembu bathola ukwehla kwesisindo, banciphisa umfutho wegazi emzimbeni kanye namafutha e-plasma. Ukungafani okuncane phakathi kwamaqembu kutholakala kuphela ku-cholesterol kanye ne-low density lipoprotein.
Lolu cwaningo luphinde lufakazele ukuthi uma ulandela inqubo esekhalori, inani likashukela alithinti ukuzuza kwesisindo namaphesenti wamafutha emzimbeni.
Kunolunye ucwaningo Umphumela wokudla kwe-eucaloric high- kanye ne-low-sucrose yokudla okunephrofayili efanayo ye-macronutrient ekumelaneni ne-insulin kanye nengozi yemisipha: isivivinyo esilawulwa ngokungahleliwe. okufakazela ukuthi i-sucrose ayithinti ukuzuza kwesisindo. Kuyo, ukudla okubili bekufana ngokwemibalo yamakhalori nama-macronutrient, kepha kokukodwa, ushukela wawubalwa u-25% wenani eliphelele lamakhalori, kwelinye, u-10%. Ngenxa yalokhu, abahlanganyeli abavela kuwo womabili amaqembu awashintshanga isisindo sabo, iphrofayili ye-glycemic, kanye nesimo se-vascular.
Ngokususelwa kudatha yocwaningo, singathola isiphetho esichazayo.
Ushukela awunikele ekuqongeleleni amafutha, uma ungeqi okwejwayelekile kilojoule yansuku zonke futhi unganciphisi inani lamaprotheni adingekayo.
Kodwa-ke, ushukela usengabangela ukukhuluphala, kepha hhayi ngokuqondile, kepha ngokungaqondile.
Ushukela usenza kanjani ukuba sibe ngamafutha
Umphumela ongemuhle ushukela esindweni uchazwa iqiniso lokuthi ukudla okumnandi kuphezulu kakhulu kilojoule. Ngokudla ukudla okunoshukela okuningi, ugijimisa ubungozi bokweqisa kakhulu i-calorie yakho, okuholela ekuzuzeni isisindo.
Ngasikhathi sinye, njengoba sishilo ngenhla, umzimba wethu ukuthanda ukudla okumnandi kakhulu futhi uyakwazi ukukudla ngezinga elikhulu. Ukudla okunjalo kufakwa ngokushesha futhi kalula, kuvuselela isikhungo senjabulo ebuchosheni nasemandleni.
Lesi sici, hhayi ushukela uqobo, esenza amaswidi umkhiqizo onobungozi empilweni.
Ushukela noma uju?
Uju, njengoba wazi, luqukethe inani elikhulu lezinto eziwusizo (amaminerali, amavithamini, ama-enzyme), okungenzeka ukuthi zizuzisa umzimba. Kodwa-ke, ukuthembela eqinisweni lokuthi ungadla uju ngamanani angenamkhawulo ngokungatholi, okungenani ngokuxhamazela. Ngoba uju luyi-70% eyakhiwa i-fructose, ushukela kanye ne-sucrose, ekugcineni engahlukile kakhulu kushukela.
Isimo sansuku zonke soju asidluli kuma-gramu ayi-0.8 uju nge-1 kg yesisindo somzimba. Okusho ukuthi, ngesisindo somzimba esingu-55 kg umuntu angadla ngokuphepha amagremu angama-44 uju. Futhi, ngokwesilinganiso, ngoba isisindo somzimba sabantu sehlukile, ukwakheka kwezinyosi nakho kuhlukile, futhi izidalwa zawo wonke umuntu ziyehlukile ...
Izinga likashukela wegazi (ushukela) ngumqondo osemqoka weziguli ezinesifo sohlobo lwe-I nohlobo II sikashukela. Ushukela ophakeme uvame ukuba wuphawu futhi uphawu oluphambili lwesigaba sokudalwa kwesifo. Ngokusho kwezokwelapha, ama-50% eziguli ezinesifo sikashukela azi kuphela nge-pathology lapho ifinyelela ezigabeni ezithuthukayo nezinzima.
Masizame ukuthola ukuthi kungani amazinga azinza wama-carbohydrate ohlelweni lokujikeleza ebaluleke kakhulu empilweni ejwayelekile yomuntu, futhi ngasizathu sini kukhona ukungalingani kwe-glucose emzimbeni. Sizophinde sithole nokuthi yiziphi izinkomba zamazinga kashukela ezijwayelekile, nokuthi izinguquko ezijwayelekile zikuthinta kanjani umzimba.
Ukulimala ushukela emzimbeni (ngamanani amakhulu):
Kubangela isifo senhliziyo,
Yenza buthaka amasosha omzimba, ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela, ushukela ongangenwa kuwo, kepha uqongelela, othinta amasosha omzimba,
Isimo sesikhumba siba sibi kakhulu - iyaguga, ilahlekelwe ukuqina. Kuqhamuke umqubuko, kuphele amandla. Ngoba Ushukela udonsa ama-radicals mahhala alimaza umzimba wethu.
Uhlanza i-calcium ephuma emathanjeni, emazinyweni. Baba buthakathaka futhi babuthaka.
Amathuba okulimazeka kwezifo nokulimala kwamazinyo, ukuqhekeka nokucekelwa phansi koqweqwe lwawo,
Ukudonswa kwamafutha emzimbeni, okuholela ekufutheni,
Kubangela isifiso sokudla okungamanga, okuholela ekudla kakhulu,
Yehlisa inani lamavithamini we-B adingekayo ukumuncwa kokudla konke emzimbeni,
Akuqukethe amavithamini, amaminerali, amaprotheni, amafutha, ama-enzyme, njll. - akunakuzuzwa!
Kwenyusa amazinga kashukela kanye ne-insulin,
Kuholela ezifweni zomgudu wesisu, isibonelo, i-gastritis, ulcer, hemorrhoids, njll.
Kungaphazamisa ukwakheka kwe-DNA, okungaholela ku-oncology,
Ushukela omhlophe ocwengekile uyisici samakhemikhali esikhishwe kuma-beet ashukela, sifana nomuthi.
Susa ukudla okuqukethe ushukela ocolisisiwe ohlangene - amaswidi, ubisi oluhlanganisiwe, amakhekhe, ikhekhe, ujamu, ushokoledi, itiye elinoshukela,
Faka esikhundleni ushukela nemikhiqizo kanye noju, izithelo ezomisiwe nezithelo.
Ushukela womhlanga onsundu unomphumela ofanayo emzimbeni njengoshukela ojwayelekile.
Vele, kukhona okuhlukile - lokhu okufakwa esikhundleni sikashukela, i.e. izithasiselo zokudla okunomsoco okungafanele nazo zihlukumezwe.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene kanye nezingoma.
Ososayensi basaphikisana ngezinzuzo zabo, ngoba zilimaza umzimba futhi, ngokwesibonelo, ziphazamisa ukulingana kwama-hormone kumuntu, okuyingozi kakhulu.
Ama-sweeteners ahlukaniswe ngemvelo futhi okufakelwa.
Izithelo zemvelo namajikijolo, isibonelo, i-fructose, i-xylitol, i-sorbitol, i-beckon, i-maltitol, njll.
Kukhona isengezo se-lime se-Stevia esenziwe emthini weStevia. Inezinto eziningi eziwusizo, inomphumela omuhle ezithweni zomuntu, kepha ibiza kakhulu.
Ngakho-ke, akukho lutho olungcono kunezithelo zemvelo, amajikijolo, izithelo ezomisiwe noju akukwenziwanga futhi futhi akufanele uhlanganyele nabathengisi abasemnandi kakhulu.
Yilokho kuphela, esihlokweni engikhulume ngaso ngengozi kashukela, mayelana nokuthi yiziphi izifo ezingadala ushukela ocwengekile omhlophe, ukuthi kungcono ukubuyisela esikhundleni uju lwemvelo nezithelo ezomisiwe.
Ngicabanga ukuthi kunzima kakhulu ukungabandakanyi ngokuphelele ushukela ekudleni, kepha ungazama, kungazelelwe, ukujwayela ukuhlala ngaphandle kwawo bese uqala ukuzizwa ungcono kakhulu?!
Uma ungakwazi ukuyeka ukuyisebenzisa ngamanani amakhulu, bukela le movie. Omunye umngani wathi umyeni wakhe ngemuva kokubuka wenqaba ushukela ngokuphelele futhi walahlekelwa ama-5 kg ​​ngenyanga eyi-1!
Inhlanhla nempilo kuwe!
Kusho ukuthini ukuthi ushukela? Lo mkhiqizo uthandwa kakhulu, ngaphandle kwawo okungekho owendlini angawenza ekhishini. Ushukela awusiwo umkhiqizo ozimele; uyangezwa emikhiqizweni ehlukene: okugciniwe, okuphekwe neminye imikhiqizo yokudla. Ushukela ubukeka njengomphunga omhlophe wekristali noma ngesimo sezicucu ezincane - elicwengekile, izingane ezithanda ukuluma.
Cishe nsuku zonke ukudla umuntu akudlayo kuqukethe ushukela. Futhi lo mkhiqizo omnandi weza kithi eminyakeni engaphezu kwengu-150 edlule. Ngalezo zinsuku, kwakungumkhiqizo obiza kakhulu futhi bekungcono okwenziwa ngabantu abampofu, abantu abajwayelekile. Ushukela awuzange uthengiswe ezitolo njengoba unjalo namanje, kodwa emakhemisi. Sasikalwa esikalini semithi futhi sithengiswa kwigram.
Ngemuva kwalokho ishukela latholakala esitshalweni sikamoba. Iziqu zayo ziqukethe inani elikhulu lejusi, elinambitheka kamnandi kakhulu. Kamuva kakhulu, abantu bafunda ukuthi bangawuthola kanjani ushukela kwesinye isitshalo - uhlobo olukhethekile lwebhungane. Futhi manje eRussia kuwumkhuba ukudla ushukela, owenziwe ngamabhungwe.
Ngokwami, lo mkhiqizo omnandi unamandla amakhulu, ngoba uqukethe i-sucrose emsulwa, yona, ewela emzimbeni womuntu, ihlukaniswe izakhi ezimbili: ushukela ne-fructose. Zibe sezifakwa emzimbeni emzimbeni wemizuzu. Amagremu ayikhulu omkhiqizo aqukethe amakhalori angaphezu kwama-400.
Ushukela ongakanani okufanele udliwe
Kusuka kudatha yezibalo, singaphetha ngokuthi wonke amaRussia adla ushukela cishe amagremu ayi-100 noma ngaphezulu ngosuku. Lokhu kuvela ukuthi kucishe kube ikhilogremu ngeviki, futhi inani elikhulu liphuma ngonyaka. Kepha e-United States, umhlali ojwayelekile udla ushukela amagremu angama-90 ukwedlula owaseRussia. Ushukela omncane omncane udliwa e-Asia nakwamanye amazwe aseYurophu. Kepha, ngokusho kodokotela, abantu bangenza kahle ngaphandle kwalo mkhiqizo, ngoba azizwa isidingo esiphuthumayo sokuthola umzimba omnandi. Futhi okujwayelekile kwansuku zonke kuphela ngama-30 amagremu kashukela ngosuku.
Ukulimala ushukela emzimbeni womuntu
IMirSovetov iphinde yaphenduka ekusebenziseni idatha yezibalo. Ushukela ulimaza kakhulu emzimbeni womuntu, ikakhulukazi uma udliwe ngokweqile.
Cabanga ngezifo eziphambili ezibangelwa ukusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi:
Amasosha omzimba ayahlupheka, imisebenzi yokuvikela umzimba iba buthaka.
Ukwephulwa, ukusweleka kwamaminerali abalulekile namavithamini.
Ukwanda okubukhali kwe-adrenaline kungadala isimo esijabulisayo ezinganeni.
Ushukela uwumkhiqizo omuhle wamaseli womdlavuza. Kungaba imbangela yezitho zokuzala, ipheshana lesisu.
Khuphula ushukela futhi kungadala i-hypoglycemia enzima.
Umzimba womuntu uyaguga ngaphambi kwesikhathi.
Ubungozi obukhulayo bokwehliswa ku.
Kubhubhisa koqweqwe lwawo.
Kuholela ekubukekeni kwesisindo ngokweqile.
Kuholela ku-asthma ne-sclerosis.
Ithinta amazinga kashukela kwabesifazane abathatha amaphilisi okulawula ukuzala.
Lowers Vitamin E.
Ithinta izinga le-insulin egazini.
Imbangela ukunganaki ezinganeni.
Ikhuthaza ukuthuthukiswa kokungafani komzimba wonke.
Kubangela izifo zesikhumba ezinganeni.
Kuthinta ukusebenza okujwayelekile kwesibindi, izinso, amanyikwe, amathumbu.
Isiza ukugcina uketshezi oluningi emzimbeni.
Ikhuthaza ukuthuthukiswa kwezindawo ezicindezelayo, ulaka olungenasisekelo.
Kuthinta umsebenzi wezocansi emadodeni.
Ngesikhathi sokukhulelwa, kungavusa ngisho ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi noma ukubambezeleka ekukhuleni kwengane, ukuzalwa kwengane enesisindo somzimba esiphansi.
Kuholela ekwandeni kwengcindezi ngokugcwele.
Kubangela ukuphuma komzimba ezinganeni ezisanda kuzalwa.
Njengoba ukwazi ukubona, imiphumela yokudla amaswidi ngokweqile okwejwayelekile iyadumaza. Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ukuthatha lo mkhiqizo kubangela ukuvela kwama-rashes ebusweni nganoma yisiphi isikhathi. Kwi-metabolism yezinyo elimnandi iyaphazamiseka bese kufakwa izifo ezintsha ebhange le-piggy of izifo, ngoba amasosha omzimba womuntu akakwazi ukubekezelela umthwalo.
"Ubuthi obumnandi" busebenza emzimbeni kancane, ngaphandle kokubanga ukukhathazeka ebantwini. Uma ubungazi, iMirSovetov izokutshela ngento esemqoka: lapho umuntu edle umkhiqizo omnandi, umzimba wakhe usebenzisa izinqolobane zawo ukumunca ushukela - izinga le-calcium liyancipha, elihlanza kancane kancane ngaphandle kwezicubu zamathambo.
Uyakhumbula umuzwa lapho amakristalu eshona emazinyweni akho? Lo mphumela wamaswidi uthinta kabi i-cavity yomlomo. Ngokulandela i-koqweqwe lwawo, amakristalu ayaqhubeka nokwenza “umsebenzi” wawo, okuholela ekubhujisweni kwezinye izinyo. Ngaphezu kwalokho, i-acidity iyanda emgodini womlomo, futhi le indlela eqondile yokukhula kwamagciwane.
Lapho umuntu edla amaswidi amaningi, i-glycogen ifakwa esibindini sakhe, weqisa ngokweqile okujwayelekile bese umzimba uqala ukuhlehlisa amaswidi, wakhe amasheya okonga amafutha. Amafutha kashukela kulula ukuwabona - ayakha esiswini nasezinkalweni.
Uma udla amaswidi ngokweqile, lokhu kungaholela ekutheni isikhumba siqale ukonakala, futhi imibimbi izovela ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi ushukela omningi uyabekelwa imali, kanti nemithombo yama-collagen iyachithwa. Noma imaphi amaswidi angumbulala womzimba womuntu.
Ushukela, ngisho namanani amancane, ungalimaza umzimba futhi uchithe amavithamini. Lokhu, okokuqala, kusebenza kumavithamini we-B, abathintekayo ezinqubweni zokugaya. Ukuze ukwazi ukuthola ubungako beshukela obungena emzimbeni, kumele asebenze kanzima: ahlukanise amavithamini ezinqolobaneni zakhe (izicubu nezitho zomzimba). Ngakho-ke, ubumnandi obuvame kakhulu bungena emzimbeni, kulapho kuzophela khona. Lokhu kungaholela ekusebenzeni ngokweqile, ekunciphiseni umbono, ezinkingeni zesikhumba, futhi kubangele nokuhlaselwa yinhliziyo.
Ushukela omhlophe ngokweqile emzimbeni uholela esifweni senhliziyo, kanti ukuntuleka kwe-thiamine kungaholela ngisho nasekuhlulekeni kwenhliziyo.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi uma bedla ushukela omningi, bazoba namandla amaningi namandla. Yize ushukela ewukuthwala kwamandla, ubangela ukushoda kwe-thiamine, futhi kuvela ukuthi amandla awakhiqizwa. Umuntu uzizwa edonsa isikhashana, bese ehlehla bese umsebenzi wakhe uncipha.
Ngenxa yokusebenzisa amaswidi ngaphezu kokujwayelekile, umuntu angathola ukuhlaselwa yi-hypoglycemia - uqala ukuzizwa ekhathele, ehlanza, futhi ngisho nokusonta kweminwe ezandleni.
Ushukela unganciphisa ukungaziguli cishe izikhathi ezingamashumi amabili! Le ndlela eqondile ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela - isifo esingesihle futhi esingalapheki. Futhi kuvezwa ukungakwazi komzimba ukumunca ushukela.Uma kunoshukela omningi, ukungatheleleki kunika ukungasebenzi kahle, kuze kube sekufeni.
Kungani i-fructose iyingozi?
Abantu abaningi bazama ukubuyisela ushukela nge-fructose yezimboni, bekuthatha njengomkhiqizo osiza kakhulu, kepha lokhu kuyinganekwane.
I-Fructose ayisetshenziswa amaseli omzimba wethu ukuthola amandla, ngakho-ke, ekwakhiweni kwayo okugcwele, ingena esibindini ukuze icutshungulwe.
Lapho, iphenduka i-uric acid, into ebangela i-gout, futhi ivimbele i-enzyme ebhekele ukulawula umfutho wegazi emzimbeni wethu futhi icutshungulwe ibe ngamafutha.
Kepha, into eyingozi kakhulu ku-fructose ukuthi ayicindezeli i-ghrelin yama-hormone, ama-hormone ethu endlala nokuntenga. Ngakho-ke, konke ukubhaka kwezimboni, ukudla okulula, iziphuzo ezinefrosesa, singasebenzisa ngokungalawuleki futhi ngamanani amakhulu, okugcwele kakhulu hhayi ngokukhuluphala kuphela, kepha nezinkinga zempilo.
Ngihlole ezimbalwa kuphela zezimpawu eziphambili ezilimaza ushukela ocwengekile omhlophe empilweni yethu, kepha uhlu luyaqhubeka njalo.
Futhi ukusetshenziswa ngokweqile koshukela kubhebhethekisa isimo sesikhumba, kuthuthukisa imfundo, kwehlise amandla omzimba, kufinyelela i-calcium emathanjeni, kukhuphule ukulingana kwamavithamini we-B emzimbeni, kupha ukhunta, kubangele ukuhudula futhi kucindezele ubuchopho bethu. Ngokuvamile, akusizi ngalutho ukuthi bathi ushukela ungukufa okumnandi!
Ngicabanga ukuthi lokhu kuzokwanela ukuqonda ukuthi kungani ushukela ulimaza nokuthi kungani kubaluleke kakhulu ukunciphisa ukusetshenziswa kwawo ngamanani amakhulu.
Kuyiqiniso, akunakwenzeka ukukuqeda ngokuphelele.
Futhi ngicela ungasebenzisi noma yiluphi uswidi wokufakelwa okwenziwayo, lokhu kuyibuthi futhi.
Khumbula ukuthi ushukela ku-apula noshukela kuswidi kuyinto izinto ezimbili ezihluke ngokuphelele. Ngokudla i-apula, ngeke uthole ukwanda okubukhali koshukela wegazi ne-insulin, ngoba lokhu kuzokwenza ushukela ocwengekile kwikhekhe noma uswidi.
Ngokuvamile, uma ufisa, ungathola enye indlela kushukela omhlophe ocwengekile oyingozi, funa nje :-)
Vele uzame, qala ngokunciphisa inani lamasipuni kashukela owafaka enkomishini yakho yetiye, ungadli isigaxa sikashokholethi wonke, kodwa ingxenye, ungafaki ingilazi kashukela esitsheni sokubhaka, kodwa izimbhangqwana ezimbalwa, gwema ukudla okusetshenzwe kanye nemikhiqizo ehlanjululwe, ushukela.
Futhi ushukela udlala yiphi indima empilweni yakho? Ingabe usukulungele ukudela amaswidi ayingozi ukuze usizakale emzimbeni wakho?
Faka le ndatshana ngamaqiniso akho, imininingwane ewusizo, thumela izindlela zakho zokushukela ezingenashukela, bhala imibono :-)
Unawe u-Alena Yasneva, size siphinde sihlangane.
Indima kashukela emzimbeni ibalulekile, ngakho-ke, kufanele ibhekwe futhi ilawulwe kahle. Ukudla kusinika amandla, amandla, ubungqabavu.
Futhi ekudleni kufanele kube amabhethri amathathu:
Ama-carbohydrate yiwona ahamba phambili kaphethiloli ekukhiqizweni kwamandla. Kepha akunakucatshangwa ngaphandle koshukela.
Ukukhiqizwa kashukela emzimbeni
Wonke umuntu uyazi ukuthi ama-carbohydrate ahlukaniswe izinhlobo ezimbili.
Ngakho-ke, udinga ukwenza njengamaScot namaBrithani - nsuku zonke ziqala ngengxenye ye-oatmeal. Asilandele lokho.
Amandla akhishwa kanjani kuma-carbohydrate? Indlela yokusebenza ayilula, isiteji esiningi.
Izakhi zezakhamzimba (i-carbohydrate) - ama-polysaccharides, ama-disaccharides agqekeza abe ama-monosaccharides (ushukela olula), amuncwa ngokuphelele egazini.
Ngemuva kwalokho isibindi siyasebenza. Iguqula ama-monosaccharides abe yigazi abe ushukela, ahanjiswa emangqamuzaneni omzimba.
Ngemuva kwalokho i-insulin ingena ekusebenzeni, ngenxa yokuthi i-glucose ihlanganiswe kanjani emangqamuzaneni futhi kukhishwe amandla, okubalulekile kithi.
Uma inani le-glucose ekhishwe likhulu kunesidingo somzimba salo, khona-ke okweqile kuguqulwa kube yi-glycogen polysaccharide, enqwabelana esibindini nesicubu somzimba. Kepha isibindi singaba nesixa esithile kuphela, kuthi lapho i-glycogen iba ngokweqile, umzimba uyiiguqule ibe ngamafutha bese uyithumela ukugcinwa kumadepho anamafutha ezingxenyeni ezihlukene zomzimba, kuvela amafile esiswini, okhalweni, emuva.
Le nqubo ingenzeka futhi ngokulandelana okuphambene nomzimba: umzimba uzizwa uphelelwa amandla, ukusabela okuphindayo kubangelwe, amafutha aqhekeka ku-glycogen, bese kuba yi-glucose, bese kukhishwa ngokukhishwa kwamandla. Kepha le nqubo yenzeka kuphela kubantu abaphilile abangenakho ukushoda ekukhiqizeni ama-hormone abo, i-insulin, elawula ukuguqulwa kweglucose emizimbeni yethu.
Uma kunokuntuleka kwe-insulin, khona-ke i-glucose engena egazini ayithuthelwanga kumaseli wezitho, inqubo ye-oxidation ayenzeki, amandla awakhiwa.
Kwenzeka into efanayo uma umuntu ekudla okuphansi kwe-carbohydrate, ushukela akahambi nokudla. Okokuqala, umzimba uqala ukukhiqiza ushukela osuka ezicutshini ze-adipose, bese umane uhlangabezana nokushoda okukhulu.
Kuzo zombili lezi zimo, kunomuzwa wokulamba - ukumunca esiswini, ubuthakathaka, isiyezi, nomlomo owomile. Izimpawu ezinjalo azidingi ukunakwa, ungalahlekelwa nawukhumbula. Ngakho-ke, kubalulekile ukulawula ushukela emzimbeni.
Isimo sikashukela emzimbeni
Kumuntu ophile kahle, izinga likashukela emzimbeni liyakhuphuka futhi kunciphe kancane, umuzwa wendlala uvele.
Kepha isilinganiso seglucose akufanele yedlule izinkomba ezijwayelekile:
umkhawulo ophansi weshukela wokuzila ngu-3.5-5,5 mmol / l,
ngemuva kokudla kumuntu ophile kahle, inkomba ikhuphuka ifinyelela ku-7.8 mmol / L.
Uma esinye salezi zinkomba siphakeme, kufanele uye kudokotela we-endocrinologist ukuze ahlolwe.
Ngohlobo 1 sikashukela, kunikezwa i-insulin therapy. I-insulin ingangena emzimbeni ngomjovo kuphela. Umthamo unqunywa udokotela ngokuqinile ngokuya ngemigomo yomuntu ngamunye.
Ngohlobo 2 sikashukela, into esemqoka ukulandela ukudla okufanele nokufinyelela isisindo somzimba esifanele.
Ngokuvamile kuyadingeka ukudla okuncane ukuze kungabikho amaconsi kushukela wegazi. Imikhiqizo efakwe ekudleni kufanele ibe nenkomba ephansi ye-glycemic kusuka ku-0 iye ku-35. Lapho iphansi inkomba yomkhiqizo, kancane kancane ushukela uyenyuka lapho udliwa.
Yakha ukudla kwakho ngokuya ngenkomba ye-glycemic iyasiza kuwo wonke umuntu onendaba nempilo yabo, hhayi nje iziguli ezinesifo sikashukela.
Isimo sokudla ushukela ngamathisipuni ayi-10 ngosuku. Lokhu kujwayele wonke umuntu ngaphandle kwabantu abanesifo sikashukela.
Lapho umuntu ekhathazekile, ukukhiqizwa kwe-insulin kunovalo futhi umuntu uqala ukudla amaswidi. Ngenxa yalokhu, lonke ushukela luzohlala luyisimo se-glucose egazini futhi lubangele ukukhuphuka okubukhali kulo. Ngakho-ke, ukwanda njalo kweglucose kungaholela kushukela. Ngakho-ke, ngesikhathi sokucindezela, zama ukungadli okumnandi ngokweqile!
Ukudla okunenkomba ye-glycemic ephansi.
Inkomba 0: shrimp, mussels, squid, oysters. Banama-iodine amaningi, i-calcium, i-phosphorus, i-iron, ne-zethusi.
Inkomba 10: I-Avocado. iqukethe i-omega-3, amavithamini eqembu B, A, C, E, D, K, usawoti we-phosphorus, magnesium. Isithelo esikhulu sabashukela.
Inkomba 25 kuya ku-35.
Izithelo namajikijolo (ubhanana, izinhlobo ezimnandi zama-apula namapheya, izinsuku, amagilebhisi, amakhiwane, amaplamu, ama-apricots omisiwe awafakiwe). Khetha amajikijolo omuncu - ama-cranberry, ama-lingonberry, amathambo. Zidle nganoma yisiphi isamba. Amajikijolo angama-Sour acebile ngama-antioxidants, aphulukisa futhi ahlanze amaseli omzimba.
I-Cherry iqukethe i-coumarin, evimbela ukuhlukaniswa kwegazi ukuthi kungaveli.
Ama-Blueberries ane-lutein, esekela umbono, kanye nesifo sikashukela.
I-Blackcurrant ingumholi kokuqukethwe kwe-rutin okuqinisa izindonga zemithambo yegazi.
Isiphetho: ushukela emzimbeni ubalulekile, bukela isisindo sakho, umsoco, ingcindezi futhi uzozivikela kuma-ushukela oshukela.
Cishe nsuku zonke ukudla umuntu akudlayo kuqukethe ushukela.Futhi lo mkhiqizo omnandi weza kithi eminyakeni engaphezu kwengu-150 edlule. Ngalezo zinsuku, kwakungumkhiqizo obiza kakhulu futhi bekungcono okwenziwa ngabantu abampofu, abantu abajwayelekile. Ushukela awuzange uthengiswe ezitolo njengoba unjalo namanje, kodwa emakhemisi. Sasikalwa esikalini semithi futhi sithengiswa kwigram.
Izinzuzo kanye nokulimaza ushukela ekusetshenzisweni kwansuku zonke
Ushukela ojwayelekile yi-carbohydrate emsulwa, unikeza umuntu amandla, lo mkhiqizo awunawo amavithamini, amaminerali noma ezinye izinto eziwusizo. Ukungena emzimbeni, ushukela ngaphansi kwethonya lamajusi wokugaya kuphulwa phansi kushukela kanye ne-fructose, kungene egazini. I-insulin ekhiqizwa yi-pancreas yenza amazinga kashukela egazi ajwayelekile, ayisabalalisa emangqamuzaneni omzimba. Ushukela omningi unqwabelana emzimbeni, uphenduke uwoyela ongewona ubuhle obukhulu esiswini, okhalweni nakwezinye izindawo. Ngemuva kokuthi ushukela obedlulele usususiwe "kwisitoreji", izinga likashukela wegazi liyancipha futhi umuntu abuye abe nomuzwa wendlala.
Ukwanda okungapheli koshukela wegazi kungaholela ekutheni ama-pancreas awasakwazi ukubhekana nokukhiqizwa kwe-insulin ngesilinganiso esifanele. Ngokuntuleka kwe-insulin, ushukela ugcwalisa igazi, abangele isifo sikashukela. Uma isiguli singanamatheli ekudleni futhi singalawuli ushukela odliwayo, imiphumela ingaba mibi kakhulu, kuze kufike ekhathweni sikashukela nokufa.
Ushukela futhi uyingozi ngoba unengxenye ekubhujisweni koqweqwe lwawo lwamazinyo ("iziloya" ezidumile ezivela ezikhangisweni yimikhiqizo yokubola ushukela ne-acid eyicubungula). Ukusetshenziswa ngokweqile koshukela kubangela ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism, kanti izinga le-cholesterol elimazayo egazini landa kakhulu, okuthi, kanye noshukela, kuthinte kabi izindonga zemithambo yegazi, kubenze bavunyelwe. Konke lokhu kungumhlabathi omuhle wokukhula kwesimo se-sclerotic phenomena, futhi kuholele esimeni esinjengesithi "ukunamathisela kweplatelet".
Njengoba unikezwe konke lokhu okungenhla, kuphakama umbuzo: Ngabe kukhona inzuzo ushukela? Ukulimala kwaso kuyaziwa yiwo wonke umuntu, kepha bambalwa abantu abazi ngezakhi eziwusizo zalo mkhiqizo (ngaphandle kokuthi kwenza ukudla kube mnandi kakhulu). Ushukela emzimbeni wehlekela kushukela, okubuye kube ngumthombo ophambili wokudla komqondo. Ushukela nawo ulungele isibindi lapho ungena emzimbeni, usiza isibindi ukuthi senze umsebenzi wokuvimbela ezintweni ezinobuthi. I-glucose isetshenziswa yisibindi ukwenza i-acid ne-glucuronic acid ebhangqiwe, ekwazi ukudonsa amakhemikhali afana ne-phenol, cresol, njll.
Ekhuluma ngezinzuzo nokulimala ushukela, umuntu akakwazi ukusho ipharamitha efana nokuqukethwe kwekhalori kwalo mkhiqizo. Ushukela uwumkhiqizo onama-calorie aphezulu kakhulu, u-1 g ushukela angama-kilojoule 4. Noma kunjalo, ukubala amakhalori owatholayo lapho uphuza itiye noma ikhofi noshukela akulungile. Ushukela utholakala cishe kuyo yonke imikhiqizo yokudla: isinkwa, amasosa, amasoso, ngisho naku-soseji - lokhu kubizwa ngokuthi "ushukela ocashilewe", inani lakhona okunzima ukubala. Ngakho-ke, kwamanye amazwe, abakhiqizi banesibopho sokubonisa kwiphakethe inani leshukela eliqukethwe kumkhiqizo.
Ukunciphisa ukulimala kweshukela emzimbeni, yazi isilinganiso! Gwema ukudla okunoshukela omningi, khawulela ushukela omsulwa owengezwe itiye, ikhofi, ezinye iziphuzo nokudla (okusanhlamvu, pasta, njll.)
Ingabe ushukela ukhulisa ubungozi besifo sikashukela sohlobo 2
Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, ukumelana ne-insulin kanye nokulawulwa kokulimala kweglucose kuvela emzimbeni. I-insulin ye-hormone ngeke isakwazi ukwenza umsebenzi wayo - ukudlulisela ushukela kumaseli omzimba, ngakho-ke izinga le-glucose egazini liyakhuphuka.
Lesi sifo sihlobene nokuthi sinamafutha amangaki esibindini noma ezizungeze ezinye izitho ezifana nenhliziyo noma izinso. Futhi njengoba ukusetshenziswa ngokweqile kwama-carbohydrate asheshayo kukhulisa ukunqwabelana kwamafutha emzimbeni, ushukela uyandisa ingozi yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2.
Kodwa-ke, iphesenti eliphelele lamafutha omzimba kanye nenani lemisebenzi yomzimba ibe nomthelela omkhulu ekutholakaleni kwesifo sikashukela.
Ngakho-ke ukuhlaziywa kwamuva kwe-meta-Ukubaluleka kokuphathwa kwezisindo ngohlobo 2 sikashukela: ukubuyekeza nokuhlaziywa kwe-meta-izifundo zezifundo zokwelapha. kukhombisile ukuthi ama-60-90% alo lonke uhlobo lwesifo sikashukela esihlotshaniswa nokukhuluphele, hhayi nakancane nenani likashukela oludliwayo. Futhi inhloso eyinhloko yesifo sikashukela ukunciphisa isisindo, hhayi ushukela.
Lokhu kungenxa yokuthi amafutha omzimba awagcini nje ngokubekelela amandla ngekusasa, kepha izicubu ezisebenzayo ezikhiqiza ama-hormone. Uma sinamafutha amaningi, lokhu kungaphazamisa isilinganiso se-metabolic, kufaka phakathi ukuthi umzimba ulawula kanjani ushukela wegazi.
Ocwaningweni oluningi, ososayensi babheka izimbangela eziphambili zesifo sikashukela:
ukwanda ngamaphesenti wamafutha omzimba
Ukulawulwa kweshukela kuyingxenye encane yokuvimbela isifo sikashukela sohlobo 2. Okubaluleke kakhulu ukulawula inani lamafutha asemzimbeni nokuzivocavoca umzimba.
Ingabe ushukela uyasithinta isifo senhliziyo?
Njengoba kunjalo ngesifo sikashukela sohlobo 2, ushukela ngokungaqondile ukhulisa ubungozi besifo senhliziyo. Ushukela wekhalori ophezulu ukhulisa amathuba okuba uzuze isisindo, futhi amanoni, njengezicubu ezisebenzayo ngokwemvelo, akhulisa ubungozi besifo senhliziyo.
Ngaphezu kwalokho, njengoba kuboniswe ngocwaningo olungenhla, ukudla okuqukethe okuqukethwe okuphezulu kwe-sucrose kwenyusa izinga le-cholesterol kanye ne-low density lipoprotein, okuthinta kabi isimo semithambo yegazi.
Kodwa-ke, ukuvela kwezifo zenhliziyo kuthonywa yizinto eziningi ezahlukahlukene: ukuba khona kwemikhuba emibi, indlela yokuphila, i-ecology, izinga lokucindezelwa, umsebenzi womzimba, inani lokulala, ukusetshenziswa kwemifino nezithelo.
Inani likashukela oludliwayo, empeleni, lithinta impilo yenhliziyo nemithambo yegazi, kepha, uma unikezwe zonke ezinye izinto ezifakwe lapha ngenhla, ucezu oluncane lo mfanekiso.
Ungadliwa ushukela ongakanani ngaphandle kokulimaza impilo
Imihlahlandlela Yokusetshenziswa Koshukela ngabadala nezingane. Ukusetshenziswa Koshukela Inhlangano Yezempilo Yomhlaba wonke ifuna ukuncishiswa kokudla ushukela okucwengisisiwe kube u-10% wamakhalori aphelele. Okusho ukuthi, uma udla ama-kcal angama-2 000 ngosuku, ama-200 awo angatholakala kushukela. Lokhu kucishe kube ngama-50 g noma wezipuni eziyishumi.
Kodwa-ke, i-WHO iphawula ukuthi ngokunciphisa ushukela odonsa ku-5% (25 g noma izipuni ezinhlanu) ngosuku, uzonciphisa ingozi yakho yokukhuluphala futhi.
Kumele kuqashelwe ukuthi izibalo zibhekisela ushukela ocwengekile kuphela, ngakho-ke ungadla izithelo ezimnandi ngaphandle kokwesaba ukwephula umuthi.
Akunakuphikwa ukuthi ushukela uyinto enempilo ngoba ayinjalo. Ayiqukethe amavithamini kanye namaminerali, ama-antioxidants, amanzi kanye ne-fiber yokudla. Uma udla ushukela omningi, ngeke ubenamandla futhi unempilo - ayinawo ama-protein noma ama-acid angenakuqina.
Kodwa ungasebenzisi idimoni, ulahla zonke izinkinga zakho zempilo ushukela.
Ezempilo, njengezifo, zakhiwa ezintweni eziningi, futhi ushukela kuphela awunakuba imbangela yokukhuluphala nokukhula kwezifo eziyingozi.
Bheka ukudliwa kwekhalori, udle amaprotheni anele, izithelo nemifino - kanye nezipuni ezimbalwa zikashukela noma i-donut emnandi ngeke kulimaze impilo yakho nesibalo.
Ushukela ongeziwe uyisakhi esibi kakhulu sokudla kwanamuhla. Kungathinta kabi i-metabolism futhi kubangele izifo ezahlukahlukene. Kulesi sihloko, uzothola izizathu eziyishumi ezethusayo zokuthi kungani kufanele ubalekele ushukela ongeziwe njengesifo.
1. Ushukela ongeziwe awunazakhi ezibalulekile futhi uyingozi emazinyweni.
Impela uke wakuzwa izikhathi eziyisigidi ... kodwa kufanelekile ukuphinda. Ushukela ongeziwe (njenge-sucrose ne-high fructose corn syrup) aqukethe inani elikhulu lama-kilojoule, kepha awekho umsoco. Ngenxa yalokhu, abizwa ngokuthi amakhalori "angenalutho". Ushukela awunawo amaprotheni, amafutha abalulekile, amavithamini noma amaminerali ... amandla amsulwa kuphela.
Lapho abantu bethola cishe amaphesenti ayi-10- 20 (noma ngaphezulu) kilojoule ngohlobo loshukela, lokhu kungaphenduka inkinga enkulu futhi kuholele ekushayweni kokudla okungenamsoco.
Ushukela nawo ulimaza kakhulu amazinyo ngoba unikeza amandla okugaya kalula amagciwane wesibeletho somlomo.
Isiphetho: Ushukela uqukethe amakhalori amaningi, kepha azikho izakhi zomzimba. Futhi, ngokunika ama-bacterium ayingozi ahlala emgodini womlomo, ushukela ubangela i-caries yamazinyo.
2. Ushukela ongeziwe uqukethe inani elikhulu le-fructose, elingadala ukugcwala kwesibindi.
Ukuzwisisa ukuthi kungani ushukela mubi kangako, udinga ukuthola ukuthi luqukethe ini. Ngaphambi kokuba ushukela ungene egazini usuka emgodini wokugaya ukudla, uqhekeka ushukela olula: ushukela ne-fructose.
IGlucose ingatholakala kunoma isiphi iseli ephilayo eMhlabeni. Uma singatholi ushukela ekudleni, kukhiqizwa umzimba wethu. I-Fructose yehlukile. Umzimba wethu awukhiqizi ngamanani abalulekile futhi asinasidingo somzimba wefrijini. Umehluko phakathi kwe-fructose ukuthi ngamanani aphakeme angasebenza kuphela ngesibindi. Lokhu akuyona inkinga uma sidla i-fructose encane (isibonelo, ngezithelo) noma sisanda kuqeda ukuzivocavoca. Kulokhu, i-fructose iphenduka ibe yi-glycogen futhi inqwabelana esibindini kuze kube yilapho siyidinga.
Kodwa-ke, uma isibindi sigcwele i-glycogen (okwenzeka kaningi), ukudla inqwaba yefriji kuyayigcwalisa, kuyiphoqa ukuthi iguqule i-fructose ibe ngamafutha. Ngokusebenzisa njalo ushukela omkhulu, le nqubo ingaholela ekwakhekeni kwezifo ezinamafutha esibindi, kanye nezinkinga ezahlukahlukene zempilo ezinkulu.
Kodwa-ke, kufanelekile ukubheka ukuthi konke lokhu akuhlobene nezithelo. Ukudla izithelo cishe akunakwenzeka ukuthola inani ngokweqile le-fructose.
Futhi kuleli cala, umehluko ngamunye udlala indima enkulu. Abantu abasebenzayo nabanempilo bayakwazi ukubhekana noshukela omningi uma kuqhathaniswa nalabo abaphila indlela yokuzijabulisa nje futhi badle ngokuhambisana nokudla kwaseNtshonalanga, okune-carbonate ephezulu ne-calorie ephezulu.
Isiphetho: KumaWestern osabekayo, inani elikhulu le-fructose kusuka kushukela ongeziwe liguquka libe ngamafutha agcinwe esibindini.
3. Ukulayisha ngokweqile isibindi nge-fructose kungadala ukonakala kwamafutha esibindi angenawo utshwala.
Lapho i-fructose esibindini iphenduka ibe ngamafutha, iphuma njenge-VLDL (i-lipoprotein ephansi kakhulu, i-approx. I-Mixednews) izinhlayiya ze-cholesterol. Kodwa-ke, akuwona wonke amafutha asusiwe esibindini, futhi amanye angahlala lapho.Lokhu kungadala ukukhula kwamafutha angenawo utshwala kwesibindi - inkinga ebhebhetheka emazweni aseNtshonalanga ahlobene kakhulu nokuphazamiseka kwe-metabolic.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abaphethwe yisibindi esinamafutha badla cishe ama-fructose aphindwe kabili noma kathathu uma kuqhathaniswa nomuntu ojwayelekile.
Isiphetho: I-fructose eyeqile iba ngamanqatha, okungafakwa esibindini futhi ngaleyo ndlela ivuse ukuthuthukiswa kokuwohloka kwesibindi okungewona utshwala.
4. Ushukela ungadala ukumelana ne-insulin, okuyisinyathelo sokuqala se-metabolic syndrome kanye noshukela.
I-insulin ibaluleke kakhulu emzimbeni. Ivumela ushukela (ushukela wegazi) ukungena kumaseli ngokungena kwegazi futhi iyalele amaseli ukuthi aqale ukushisa ushukela esikhundleni samafutha.
Ushukela omkhulu wegazi ulimaza kakhulu futhi ungenye yezimbangela zokuphazamiseka kwesifo sikashukela, njengobumpumputhe. Enye yezimpawu zokuphazamiseka kokugaya ukudla okubangelwa ukudla kwaseNtshonalanga ukuthi i-insulin iyeka ukusebenza kahle. Amaseli abe "amelana" nawo.
Le nto yaziwa nangokuthi ukumelana ne-insulin, okuthathwa njengento ehamba phambili ekwakhiweni kwezifo eziningi ... kufaka phakathi i-metabolic syndrome, ukukhuluphala, izifo zesifo senhliziyo, futhi ikakhulukazi uhlobo 2 sikashukela.
Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi ukudla ushukela kuhlotshaniswa nokumelana ne-insulin, ikakhulukazi uma kudliwe ngamanani amakhulu.
Isiphetho: Ukudla ushukela omkhulu kungadala ukumelana kwama-insulin, nakho kungaholela ezifweni ezahlukahlukene.
5. Ukumelana ne-insulin kungakhula kube uhlobo 2 sikashukela.
Lapho amaseli ethu ehluleka ukumelana nemiphumela ye-insulin, amaseli ethu we-pancreatic beta akhiqiza nalawa mahomoni amaningi. Le nqubo ibaluleke kakhulu, ngoba ukukhuphuka njalo kwamazinga kashukela wegazi kungadala ukulimala okukhulu emzimbeni.
Ngenxa yalokho, lapho ukumelana kwe-insulin kukhuphuka, ipancreas ilahlekelwa amandla ayo okukhiqiza i-insulin eyanele ukugcina ushukela wegazi uphansi. Kulokhu, izinga likashukela wegazi liyagxuma futhi ukuxilongwa kwenziwa - thayipha 2 isifo sikashukela.
Uma unikezwe ukuthi ushukela ungadala ukumelana ne-insulin, akumangalisi ukuthi abantu abaphuza iziphuzo ezinoshukela banamaphesenti angama-83 ngaphezulu abasengozini yohlobo 2 sikashukela.
Isiphetho: Ngenxa yomthelela omubi ekusebenzeni kwe-insulin, ushukela uyimbangela eyinhloko yokwakhiwa kwesifo sikashukela sohlobo 2.
6. Ushukela ungadala umdlavuza.
Umdlavuza ungenye yezimbangela eziphambili zokufa emhlabeni wonke. Kubonakala ngokukhula okungalawulwa kweseli nokukhiqizwa kabusha. Enye yama-hormone aphambili alawula lokhu kukhula yi-insulin.
Ngalesi sizathu, ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi ukwanda okuvame kwamazinga we-insulin yegazi (umphumela wokudla ushukela) kungaholela kumdlavuza. Ngaphezu kwalokho, izinkinga ezinoshukela ezihlobene nokugaya ziyimbangela eyaziwayo yokuvuvukala, enye into enomdlavuza.
Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi abantu abadla ushukela omkhulu basengozini enkulu yokuthola umdlavuza.
Isiphetho: Kunobufakazi obukhulu bokuthi ushukela ungawubangela umdlavuza ngenxa yomthelela wawo omubi kuma-metabolism.
7. Ngenxa yemiphumela yayo kuma-hormone nasengqondweni, ushukela uvusa kakhulu ukwakheka kwamafutha.
Akuwona wonke amakhalori adalwe alingana. Ukudla okuhlukahlukene kuthinta ubuchopho bethu kanye nama-hormone alawula ukungena kokudla ngezindlela ezihlukile.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-fructose ayinawo umphumela ofanayo ku-satiety njengoba ne-glucose inakho. Kokunye isifundo, izifundo zaziphuza iziphuzo ezinoshukela nge-fructose futhi zithosiwe ngoshukela.Kamuva, labo ababedla i-fructose babenomsebenzi ophansi ezindaweni zokugcwalisa ezisebuchosheni, futhi bazizwa belambile ngokwengeziwe.
Kwenziwe nocwaningo okwakhombisa ukuthi i-fructose ayilinciphisi izinga le-ghrelin ye-hormone yendlala ngangokunokwenzeka u-glucose angayenza. Ngokuhamba kwesikhathi, lesi sici sama-kilojoule kashukela kungaholela ekwandeni kokudla kwekhalori.
Isiphetho: I-Fructose ayikhombisi ukugcwala kwengqondo futhi, ngokungafani noshukela, ayinciphisi izinga le-ghrelin ye-hormone yendlala.
8. Ngokukhombisa ukukhishwa okuningi kwe-dopamine ebuchosheni, ushukela ungaba umlutha.
Kwabaningi, ushukela ungaba umlutha. Njengezidakamizwa, ushukela ubangela ukumbiwa enkabeni yenjabulo ebuchosheni bomuntu. Inkinga ngoshukela nokudla okungenampilo kakhulu ukuthi ibanga i-dopamine ... imfihlo ekhulu kakhulu kunaleyo ebangelwa ukudla kwemvelo. Ngakho-ke, abantu abathanda ukulutha bangahlakulela umlutha oqinile ushukela neminye imikhiqizo elimazayo. Imiyalo yokuthi yonke into kufanele ilinganiselwe kungenzeka ingasebenzi nabantu abayimilutha yokudla okungenamsoco ... ngoba ukuphela kwento esebenza ngempumelelo uma umlutha kungukuhoxa.
Isiphetho: Njengoba ushukela uvusa i-dopamine eningi ebuchosheni, kungaba umlutha kubantu abaningi.
9. Ushukela uyimbangela eyinhloko yokukhuluphala, kokubili phakathi kwabantu abadala naphakathi kwezingane.
Imiphumela yoshukela kuma-hormone nasengqondweni iyindlela yokuthola inzuzo enesisindo. Lo mphumela ucindezela umuzwa wokugcwala futhi ungadala umuntu umlutha, futhi ngenxa yalokho ulahlekelwa ukulawula kokudla kakhulu.
Ngeshwa, labo abadla ushukela omningi kakhulu banokukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala. Lokhu kusebenza kuzo zonke izigaba zobudala.
Ubudlelwano phakathi kokudla ushukela kanye nokukhuluphala kufundwe ngenani elikhulu lezifundo ezitholakele ubudlelwano obucacile bezibalo phakathi kwalaba bobabili.
Ubudlelwano buqinile ikakhulukazi ezinganeni, esimweni lapho ukusetshenziswa kwansuku zonke kwesiphuzo noshukela kuhlotshaniswa nokwenyuka okukhulu kwamaphesenti angama-60 engozini yokukhuluphala.
Enye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu ongazithatha ukwehlisa isisindo ukunciphisa kakhulu ushukela wakho.
Isiphetho: Ngenxa yomthelela wayo kuma-hormone nobuchopho, ushukela ukhulisa kakhulu ingozi yokukhuluphala kanye nokukhuluphala.
10. Hhayi amanoni, kepha ushukela unyusa i-cholesterol yegazi futhi uholela esifweni senhliziyo.
Sekungamashumi eminyaka, abantu bekhala ngamafutha agcwele izifo zenhliziyo, okuyimbangela yokufa emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi amafutha agcwele alinangozi. Ubufakazi buveza ukuthi ayinamanoni, kepha ushukela ongaba imbangela enkulu yesifo senhliziyo ngenxa yomthelela omubi we-fructose metabolism.
Ngokusho kocwaningo, emavikini ayishumi nje, inani elikhulu le-fructose lingakhuphula ama-triglycerides, ama-oxidised low-density lipoproteins (ayalimaza kakhulu), ushukela wegazi kanye namazinga e-insulin, kanye nokwandisa ingozi yokukhuluphala okuphakathi.
Zonke lezi zinto ezingenhla ziyizinto eziyingozi ezinkulu zesifo senhliziyo.
Akumangazi ukuthi izifundo eziningi ezingezona zokuhlola zithole ubudlelwane obuqinile phakathi kwezibalo ezinoshukela nezifo zenhliziyo.
Umphumela: Kubantu abane-contraindication, kukhulu. Ama-kilojoule angenalutho ayisihloko nje seqhwa.
I-Sugar Imbalance: Imiphumela
Noma yikuphi ukungalingani okuqhubekayo (i-homeostasis) emzimbeni kuholela ku-pathology. Okuhlukile akuyona ushukela.
I-Hyperglycemia ne-hypoglycemia kubangela ukubonakaliswa kobuhlungu, okuvame ukuholela ezinkingeni noma ekukhubazekeni okungalapheki.
Izimbangela nezimpawu zohlobo 1 sikashukela. Funda kabanzi lapha.
Okubalulekile ukwazi ngokwakhiwa, izinhlobo kanye nama-kilojoule oshukela.Yini inzuzo nokulinyazwa koshukela emzimbeni womuntu
Izibalo zamanje ziyaqinisekisa iqiniso lokuthi ukusetshenziswa koshukela ngonyaka kuyanda.
Umuntu ngamunye ubiza cishe ama-60 kg alo mkhiqizo ngonyaka. Namuhla kungenye yemikhiqizo ejwayelekile eyakha ukudla okujwayelekile kwansuku zonke. Akekho ophika isidingo sobukhona bakhe ekudleni. Kepha inzuzo noma ukulimala okuzoletha kumuntu kuncike ekutheni isetshenziswe kangakanani.
Ushukela: ukwakheka kwalo, okuqukethwe kwekhalori, izinhlobo
Ushukela - i-sucrose yemvelaphi yesitshalo, ngefomu yayo emsulwa - i-carbohydrate, equkethe ushukela ne-fructose.
Igama layo "sarkara" eliguqulweni lisho ukuthi "isihlabathi", livela kwaSanskrit. Lokhu kusho ukuthi umkhiqizo wawaziwa kumuntu ezikhathini zasendulo.
Ngokuphathelene nezinto ezingavuthiwe okwenziwe ngazo ushukela, kukhona izinhlobo:
Wonke amabanga kashukela akhiqizwa:
Ukucabanga kabusha kuyinqubo yokuhlanza ngokuphelele umkhiqizo kusuka lapho kukhona khona izicubu, usawoti, usawoti wamaminerali, amavithamini, izinto ze-gummy. Umphumela wokucubungula ukuthola izinhlayiya ezinoshukela omhlophe.
Phakathi kwabo, izinhlobo ezihlanjululwayo nezingachazwanga zinomehluko ekubumbeni. Ushukela omhlophe uqukethe cishe wonke ama-carbohydrate, kuyilapho onsundu enokungcola okwengeziwe. Uhlu lwalezi zinto ezingcolile nevolumu yokuphakama kwazo kuncike kukhwalithi yokuhlanzwa nezinto zokusetshenziswa.
Ushukela Ochaziwe Ongafakwanga Ushukela
Amakhalori, kcal 399 396
Ama-carbohydrate, gr. 99.6 96
I-calcium calcium 3 22-62.7
Iphosphorus, mg. - 4-22,3
Magnesium, mg. - 4-117
Potassium, mg. 3 40-330
Umehluko ekwakhekeni kwamakhemikhali phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zomkhiqizo awunalutho. Ama-kilojoule ushukela nokuqukethwe kwamaprotheni cishe kuyafana.
Umehluko omncane ubonwa kokuqukethwe amaprotheni namafutha (awekho ngokuphelele kushukela omhlophe).
I-Hypoglycemia ivame ukubangelwa ukungondleki okwanele noma okungafanele, imithwalo eyeqile (ngokomzimba nangokomqondo). Ukudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu (amaswidi kanye nama-carbohydrate asheshayo) ekuqaleni kukhuphula kakhulu ushukela, kepha bese kubangela ukuncipha kwawo okusheshayo, okuholela emiphumeleni ye-pathological.
Ukwelashwa kwe-hypoglycemia ejwayelekile kungukudla okufanele kokudla okuthile ngezikhathi ezithile ezimfushane.
Wonke umuntu udinga ukulawula inkomba ye-glycemic, kepha ikakhulukazi abantu abanesifo sikashukela. Indlela ephumelela kunazo zonke yokugcina i-homeostasis ukulandela ukudla, ulungisa okuqukethwe kwe-carbohydrate kwimenyu, nokuxilongwa njalo emtholampilo.
Ushukela: yiziphi izinzuzo zomzimba
Naphezu komqondo ovamile ngobungozi beshukela, ungakhohlwa ukuthi inani elincane lawo liyadingeka kumuntu. Odokotela baqinisekisile iqiniso lokuthi ngeke kwenzeke ukuba khona komzimba womuntu ngaphandle kokungabikho ngokuphelele.
Inzuzo ukuthi inani elilinganayo loshukela linikeza umzimba amandla amaningi. Iglucose efakiwe kuyo iyakwazi ukwanelisa ukufunwa kwamandla omzimba.
I-glucose isiza izithikamezo zobuthi ebuthweni esibindini nasebondini. Ngenxa yesakhiwo sayo esisebenzayo, imijovo kashukela ibekelwe iziguli lapho isusa ukudakwa kanye nezifo eziningi zesibindi. Ku-pathology yalezi zitho, kunqunywe "ukudla kweshukela".
Ushukela uvuselela ukukhiqizwa kwe-serotonin. Ibizwa nangokuthi yi-hormone "yenjabulo." Umkhiqizo wenza kusebenze ukujikeleza kwegazi ebuchosheni. Uma uyenqaba, izinguquko ze-sclerotic zizobonwa. Umkhiqizo unciphisa ubungozi bokubumbana kwama-plaque emithanjeni yegazi, okunciphisa amathuba okugoqeka kwegazi, futhi abathandi bobumnandi mancane amathuba okuba bahlaselwe yisifo samathambo.
Ngendlela efanelekile futhi ebhekwe kulo mkhiqizo, ingaba wusizo emzimbeni.
Ushukela: yini elimaza impilo
Lapho ushukela udliwa kakhulu, kubangelwa ukulimala kwempilo:
1. Ukuqina kwethambo kwenzeka. Inqubo yokwenziwa ushukela ngumzimba nokuqhekeka kwayo kuma-carbohydrate kungenzeka ngosizo lwe-calcium. Ngomthamo omkhulu womkhiqizo, inani elidingekayo le-calcium ekucutshungweni kwalo lithathwa ezicutshini zamathambo. Ngakho-ke, "izinyo elimnandi" linokuncipha kwezinyo kanye nezicubu zamathambo, ubungozi bokuqhekeka luyanda.
2. Ngokuvamile kuba nezifo zamazinyo nezinsini. Ushukela uthinta kabi imvelo ye-acid emlonyeni futhi ulimaza isimo se-koqweqwe lwawo emazinyweni. Ngaphansi kwesenzo sayo, ibhujiswa ngokushesha, iba sengozini yamagciwane namagciwane.
3. Ukwanda okusheshayo kwesisindo somzimba kungenxa yokuvezwa kwamafutha ngaphansi kwesikhumba sesisu, okhalweni. Okumnandi kubangela ukukhuphuka kwe-insulin, okunomthelela ekucashunweni kwama-neurons abhekene nesifiso sokudla. Ukuvuka kwabo kubangela umuzwa wendlala yamanga, futhi umuntu uqala ukudla kaningi.
4. Ukusheshisa inqubo yokuguga. Uyakwazi ukwenza i-collagen ingathathi hlangothi, ebhekele ukuqina nokuqina kwesikhumba. Njengomphumela womsebenzi wakhe, inani kanye nokujula kwemibimbi kuyanda.
5. Ukungathathi hlangothi kwamavithamini. Ngokufakwa kweglucose okujwayelekile, kudliwe inani elikhulu lamavithamini we-B. Ngobuningi bayo, ukuntuleka kwamavithamini kuyakhula emzimbeni, okuholela ekwandiseni inani lezinhlungu ezingamahlalakhona kanye nokwanda kwezifo ezintsha.
6. Umphumela wokulutha kumaswidi uyathuthuka. Ukusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi kufaka ukuxhomekeka kwengqondo, okufana nezimpawu ze-narcotic.
7. Ukwehla kwamandla. Kubukeka kuyindida ukuthi ushukela, ngokuba ngumthwali wamandla oqinile, okwazi ukubangela ukwehla okukhulu ekuhlanganiseni kwama-carbohydrate emzimbeni, kanye nokukhuphuka kwe-insulin - ukuthuthukiswa kokunganaki nokudangala.
Ukwephula kwenhliziyo. Ukuthuthukiswa kwe-dystrophy yemisipha yenhliziyo kuhlotshaniswa nokuntuleka kwamavithamini emzimbeni.
Ukudla okuningi ejwayelekile kunoshukela. Okuqukethwe kuyo "kuhamba ngesilinganiso" kusoda, ekubhaka, kososo, ezinhlakeni ezenziwe ekhaya, kubalwa futhi kulondolozwa, kophudingi. Ngokusetshenziswa njalo kwale mikhiqizo, “inani” elihlaba umxhwele lale carbohydrate liyakhuphuka futhi izakhiwo zalo eziwusizo zincishiswa zibe yi-zero.
Kwabesifazane abakhulelwe nababambayo: ukulimala koshukela
Ingozi kashukela kwabesifazane nabesifazane abakhulelwe abancelisa izingane zabo amanga, okokuqala, kubuchwepheshe bokukhiqizwa kwayo. I-Crystalline ushukela ifakwa kumakhemikhali, ngemuva kwalokho inani lama-carbohydrate alusizo ancishisiwe
Okwesibili, ukusongela kwalo mkhiqizo kulele ekutheni kuchithwa i-calcium eningi ukumuncwa kwawo. Le nto ibalulekile ekwakhekeni okufanele kwezicubu zamathambo kanye namathambo engane. Uma i-calcium isetshenziswa ekuthakatheni ushukela, kuphakama inkinga ephindwe kabili: ukuntuleka kwalesi sici komama nengane.
Okwesithathu, ushukela izikhathi eziningana kunciphisa izakhiwo zokuvikela zomzimba, okuholela ekuthini athuthukiswe kwezifo eziningi kanye nokwanda kwesifo esingelapheki.
Okwesine, ngokudla kakhulu lo mkhiqizo, inqubo yokwakhiwa kwamafutha iyathuthukiswa. Uma umama okhulelwe engathathi zinyathelo zokuqinisa isimo sakhe, khona-ke kukhona ingozi yokuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Ushukela nawo uyingozi ngoba uyakwazi ukudla amavithamini e-B. Ukuntuleka kwawo kuthinta hhayi kuphela isimo somama, kodwa futhi nengane: ukubonwa kwe-acuity ebonakalayo kuyancipha, ukwesaba, umuzwa wokukhathala okungapheli uvela, izinkinga zokulala, ithoni yemisipha ebuthakathaka, ukungasebenzi komzimba kuyancipha, inkumbulo nokucabanga kuwohloka, njll. Izinkinga ezinjalo zizonyamalala ngokuphelele uma ukusetshenziswa koshukela bemvelo kufakiwe ekudleni.
Yonke le miphumela kumele ikhunjulwe njalo omama abafuna ukuzibona bephilile nezingane zabo.
Ushukela wezingane: muhle noma mubi
Ukondliwa okufanele kuthathwa njengesihluthulelo sempilo yengane.Namuhla, ezitolo kunezinhlobonhlobo zamaswidi ngokubekwa okugqamile futhi okuhle. Kunzima ukumelana nokuvikela ingane ekuzameni uswidi, ikhekhe. Abazali ababoni lutho olubi ngalokho. Omama nobaba abacabangi nakancane ukuthi ingane “yobumnandi” bengane yabo ingaholelani.
Ngaphansi kweshukela kungalimaza ukubulala iphango. Kepha empeleni, uhlu lokuthi ukusetshenziswa kwalo ngokweqile kuholela kuphi:
1. Okumnandi kubangela ukuphazamiseka esimweni somzwelo nokuziphatha kwengane. Ukulimala kwekhanda, ukushintshwa kwemizwa ejwayelekile, ukukhathala, ukuphazamiseka kokulala, ukulahleka kwenkumbulo yizimpawu ezibonakala ezinganeni ezivame ukudla ushukela.
2. Ukuzivikela komzimba kuyancipha. Ngezikhathi ezithile, ubungozi bokuthola izifo bukhuphuka ngenxa yokwehla kokungazinzi komzimba. Akunconywa ukuthi "pamper" izinsana ezimnandi lapho zigula, ngoba i-glucose isiza ukuthuthukiswa kwe-microflora ye-pathogenic.
3. Ushukela uphuca izingane ama-microorganisms azuzisayo. Ukuqoqwa kwe-chromium ne-calcium, namavithamini we-B kuncishiswa ikakhulukazi.
4. Amazinyo namathambo ayabhujiswa. I-calcium, okuyisihluthulelo samazinyo anempilo namathambo aqinile, iyadingeka ngezinga elikhulu ukuthola ishukela okujwayelekile. Ngakho-ke, okokuqala, amazinyo namathambo kuyathinteka.
Ngaphezu kwalokhu kushiyeka, umuntu kumele akucabangele iqiniso lokuthi amaswidi aqukethe izimbotshana, udayi, ukunambitheka, izithuthukisi zokunambitha ezingalethi izinzuzo zezempilo. Ngakho-ke, ukunikeza izingane okumnandi noma cha - abazali bazinqumela bona.
Ushukela: ukulimaza ukunciphisa umzimba
Ukuletha lesi sibalo ngokuhleleka okufanele, ngeke kwanele ukubala inani lamakhalori atholakala nsuku zonke.
Emzabalazweni wokulwa nesisindo ngokweqile, ukukhawulelwa okubukhali noma ukwenqatshelwa kwayo yonke imikhiqizo esezingeni eliphezulu neziphuzo ezinoshukela ezinekhabhoni kuqala.
Isizathu sokukhawulelwa ukuba khona ushukela kubo - umkhiqizo othinta kakhulu:
Umsebenzi wesistimu yokugaya ukudla,
Kuthuthukisa umlutha kumaswidi,
Kubangela umuzwa wamanga wendlala, kukwenze udle kaningi.
Umkhiqizo unokuqukethwe kwekhalori okuphezulu (ku-100 g. Cishe kube ngu-400 kcal.) Futhi kuvinjelwe ngokuphelele izazi zezempilo.
Labo abazama ukubeka imizimba yabo ukuze bangakhohlwa ukuthi kuze kufinyelele ku-15% wesisindo esiphelele kumakhukhi nakumaswidi ushukela, kumajusi, yoghurini no-ayisikhilimu - kuze kufinyelele ku-10%, kuthi kushukela omnandi okuqukethwe kwawo kufinyelele ku-33 % Akukho inzuzo emzimbeni kusuka kulokhu okuqukethwe ushukela.
Ukwehla kwesisindo okuphumelelayo, inani lamakhalori ngosuku kufanele lehliswe libe ngu-1500, ngesilinganiso esisezingeni lika-2000 kcal ngosuku. Izazi zezempilo zilinganisela ukuthi umuntu wesifazane akakwazi ukudla ngaphezulu kuka-32g kashukela ngosuku, owesilisa - 48g. Lesi sibalo sihlanganisa noshukela osekuqulweni kwemikhiqizo. Ngakho-ke, kungcono ukwenqaba ngokuphelele ukuyisebenzisa ngendlela yayo emsulwa kulabo abalandela isibalo.
Namuhla, ushukela ufakwa ekudleni kwansuku zonke komuntu wonke futhi kunzima kakhulu ukucabanga impilo yakhe ngaphandle kwawo. Kodwa ukuze balondoloze impilo yabo nempilo yabathandekayo, kungcono ukuwushiya ngokuphelele lo mkhiqizo noma ukunciphisa ukusetshenziswa kwawo.
Impilo emnandi. Izinzuzo kanye nokulimala ushukela
Ushukela - ulusizo noma cha?
Cishe ushukela, ngisho nakule minyaka yethu ethuthuka kakhulu, kunempikiswano enkulu. Abanye bathi lo mkhiqizo omnandi awutho ngaphandle kokuthi “ukufa okumhlophe,” kodwa kwabanye itiye elinoshukela kuyindlela enhle yokuzijabulisa nokuzijabulisa. Ah phela, yini enye ushukela, olungele umzimba womuntu, noma olimazayo? Okungukuthi, sizokhuluma noshukela namuhla nawe ...
Impela, akekho noyedwa umuntu ongeke athande ... ushukela. Lokho nje, iningi lethu liyayithanda ukunambitheka kwalo, futhi hhayi ukuthi lo mkhiqizo uyini ngempela. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi kwabaningi kuzoba ukutholakala ukuthi Ushukela umkhiqizo onekhalori ephezulu engenawo amavithamini, amaminerali, i-fiber (okuhlukile kunsundu, amamaki kashukela acwengiwe). Kuyiphutha futhi ukucabanga ukuthi ushukela kumane kuyinto esetshenziswayo ngesimo sikashukela noma amashubhu. I-glucose, i-fructose, i-sucrose, i-lactose (uhlobo lobisi kashukela), i-maltose (ushukela okhishwa ku-malt), i-stachyose (etholakala emidumbeni), i-trehalose ne-haloactose (etholakala ku amakhowe).
Cishe usuvele wabona ukuthi ushukela kubhekiselwa kuwo ngokuthi ama-carbohydrate alula, esisanda kubhala ngawo kuwebhusayithi yethu. Ngakho-ke, i-glucose kuphela, i-fructose, i-sucrose ne-lactose amanani anempilo wokudla kubantu . Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi ubheke ngayinye yalezi zinhlobo zoshukela ngokuningiliziwe.
Ukwakheka kukaBrown Sugar
Ukwakheka kweshukela onsundu kufaka phakathi izinto eziningi eziwusizo kanye nama-molasses amnyama, futhi kungumcebo ongokoqobo wezinto ezibalulekile namaminerali - calcium, potassium, zinc kanye ne-zethusi. Ngakho ama-molasses amnyama aqukethe i-calcium ethe xaxa kunaleyo etholakala emikhiqizweni yobisi, ethathwa njengabaholi kokuqukethwe kwe-calcium edingekayo kumathambo namazinyo anempilo. Futhi, ngokuya okuqukethwe ithusi, ama-lobster kuphela, ama-oysters nesibindi okuthosiwe angathola ushukela onsundu. Futhi uma lezi zitsha kungezona izivakashi ezijwayelekile kumenyu yethu yansuku zonke, ushukela onsundu ungavela kaningi kuwo.
Ukwakheka okhethekile ushukela onsundu onsundu akuvumela ukuba unciphise isisindo ngenkathi uwudla ... futhi ngasikhathi sinye ungasebenzisi umkhawulo ekusebenziseni kwamaswidi anjalo. Kuyilapho, uma udla ushukela omhlophe, khona-ke kulapho kulindwa khona ikhekhe ngalinye ngokweqile.
Ukuqapha - Inkohliso
Kulezi zinsuku, lapho osomabhizinisi abangahlanzekile besezandleni, benza inkohliso ukuzuza inzuzo, bekhetha ushukela onsundu, umuntu kufanele aqaphele kakhulu. Iqiniso ngukuthi esikhundleni soshukela womhlanga osebenzayo (ukhule ngendlela ekhethekile, ngaphandle kokusebenzisa izinambuzane nokubulala izibulala-zinambuzane, izithasiselo nodayi, kuqoqwe ngokuluhlaza - ukugcina izinto ezisebenzisekayo, futhi kusetshenzwe ngazo, kuzanywa ukugcina ukwakheka okubalulekile ngangokunokwenzeka - lokhu kuyimfihlo yonke) izinzuzo zeshukela elinjalo) unganikezwa "okunye" kwalo - ushukela we-brown beet. Eqinisweni, imihlomulo ekulo ingama-0%, kepha abakhiqizi bakashukela abanjalo abansundu benza umbala othize ngokumboza nge-molasses. Okungukuthi, ngokomqondo, akusasebenzi njengoba besilindele.
Uyini ushukela onsundu futhi ungasetshenziselwa ini
Eqinisweni, kunezinhlobonhlobo eziningi zoshukela wangempela onsundu owenziwe umoba. Futhi, umehluko phakathi koshukela onjalo, okokuqala, ukuthi ingakanani i-molasses equkethe. Ngakho ushukela onsundu omnyama unombala obukhali, iphunga elinamandla futhi livame ukusetshenziswa ukwengeza ezitsheni ezahlukahlukene. Ushukela onsundu okhanyayo uvame ukusetshenziswa njengenye indlela ushukela wethu omhlophe ojwayelekile.
Izinhlobo ezaziwa kakhulu zoshukela onsundu okufanele uthembele kuzo yile:
IGolden Granulated - Izinhlayiya ezinjengegolide ezikhanyayo zinhle kakhulu zokungezwa itiye, ikhofi, amasaladi ezithelo namabele.
IDemerara - lolu hlobo lukashukela onsundu lunephunga elithile, futhi ukuhlangana kwalo akuyona ukunambitheka, okungukuthi i-molasses.
I-Muskvoda - lokhu okuhlukahlukene kumelwe izinhlobo ezimbili. Eyodwa icishe ibe mnyama, ihlale inomswakama, ilungele ukufaka iwayini elicwengekile, imichilo, amasoso kanye nokuthosa kwinqubo yokupheka. Okunye ukudla kuyathanda nokuyidla ngesipuni. Futhi, lapha izinhlobonhlobo ezilula zinambitheka kakhulu kufrikhidi, futhi kungcono ukuyifaka khekhe nokhilimu.
I-cuisine yaseJapan, ebhekwa njengemodeli yokudla okulinganiselayo, isebenzisa ngentshiseko ushukela onsundu, ingeze kuzo zonke izitsha ezingenzeka.
Ushukela onjalo onsundu ungadliwa ngaphandle kwemikhawulo, ngoba uzonikeza umzimba wakho inani lamandla adingekayo, kodwa ngeke lishiya uphawu lwalo esibonelweni sakho.
Uma ushukela omhlophe ungonakalisa ukunambitheka kwesiphuzo, khona-ke ushukela onsundu uyoba isengezo esimnandi salo futhi ulandele ubumnandi obumnandi.
Ushukela onsundu ungafakwa kuma-khekhe, kuhamba kahle ngamagilebhisi nama-alimondi, futhi kuthuthukisa ukunambitheka koshokoledi.
Ungalugcina kanjani ushukela onsundu
Labo abadla ushukela onsundu njengokudla baphawula amandla alo okunamathela ndawonye - uma lokhu kwenzeka, ungasika ushukela olunjalo ngommese, noma uxhaso ngaphezu komusi. Futhi, ukuze uvikele izehlakalo ezingezinhle kangako, okuthi noma kunjalo, zingathinti izinzuzo zalo mkhiqizo, ungabeka ucezu lwesithelo esisha esitsheni sengilazi lapho ungagcina khona amasheya akho abalulekile ansundu.
Ukulimala ushukela omhlophe
Kungani ushukela omhlophe uyingozi?
Akuyona imfihlo kunoma ubani lokho ukusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi kungadala ukuphazamiseka kwe-metabolic emzimbeni womuntu, ukukhuluphala, isifo sikashukela kanye nokubhujiswa kwe-enamel yezinyo (ama-caries, ngamanye amagama) . Kepha, uzama ukukufakazela konke lokhu ngezinyo elimnandi ... Akazukulalela, futhi uzokucacisa lokhu ngokuthi akakwazi ukucabanga impilo yakhe ngaphandle koshukela.
Uma ingxabano enjalo yokulimala akuyona impikiswano, sizokunikeza imiphumela yocwaningo lwakamuva olwenziwe ososayensi. Bakwazi ukukufakazela lokho abathandi beshukela (njengabathandi bokudla okunamafutha), ngenxa yokuthanda kwabo, basengozini yokuba nomdlavuza.
Ngaphezu kwalokho, bambalwa abantu abakwaziyo lokho impuphu emhlophe emhlophe ebizwa ngokuthi "ushukela" inempahla eyodwa engeyona ewusizo - ukukhipha amavithamini e-B egazini lethu, okungadala izifo ezinkulu ezifana nesifo sokuqina kwenhliziyo, isifo senhliziyo, nezifo zemithambo.
Ngingakwazi yini ukuphuza itiye noshukela?
Ukuhlukunyezwa Ushukela - lo mqondo awuhlanganisi nje kuphela ukudla amaswidi ngokweqile, kodwa futhi netiye noshukela. "Uthando" olunjalo luthinta kabi uhlelo lomuntu lwesisu. Ngokuqondene nesikhumba nezinwele zethu, hhayi-ke izinyo elilodwa elimnandi, ngeshwa, angasho ukuthi akanankinga nalokhu, isikhumba sakhe sithambekele ekuqhekekeni komzimba, nezinwele zakhe zithambile futhi zingcolile. Ungakhohlwa nokuthi ukuthanda ngokweqile amaswidi ezinganeni kuvame ukuba imbangela we-neurosis ngisho ne-hyperactivity yezingane. Uma sibeka konke lokhu endishini eyodwa yesikali, ngakolunye uhlangothi sibeke injabulo yethu yesikhashana kushukela - awucabangi yini ukuthi akukho ukulingana phakathi kwesikali? Kunalokho, kunalokho, inzuzo ecacile evumela ukulimaza ushukela emizimbeni yethu.
Ososayensi, ngocwaningo olude noludonsa izinhlungu, basakwazi ukubala umhlaba ophakathi nendawo - umthamo ophelele walo mkhiqizo. Ngakho
ishukela lansuku zonke kumuntu omdala ngama-gramu angama-50-60. Ezinkomeni zokulinganisa ezilinganayo, sithola amathisipuni ayi-10 kashukela.
Yilokho ushukela ongakanani futhi okufanele kudliwe ngosuku. Kodwa-ke, ososayensi babuye bashesha ukusixwayisa ukuthi umqondo wokuthi "okujwayelekile" wawungafaki ushukela omsulwa kuphela, kepha noshukela, oqukethwe ku-confectionery. Ngendlela, uyazi ukuthi ukwakheka kwemikhiqizo eminingi okungekho emnandi ngokunambitheka kusabandakanya inani eliphansi loshukela. Okufanayo kuhamba ngemifino nezithelo. Ngakho-ke, amathisipuni ayishumi kashukela - lolu ushukela, oqukethwe ekudleni kwethu.
Njengoba asendulo asho, umuzwa wokulingana umuzwa omkhulu kunayo yonke. Ukufaka lesi sitatimende maqondana nesihloko sethu sanamuhla, uyaqonda ukuthi yikuphi umugqa omuhle phakathi kwezinzuzo nokulimala kwalo mkhiqizo uyipuni elilodwa nje ...
Kuyaphawuleka ukuthi izimpawu zokuthi "ukweqisa ngokweqile" kanye "nokuntuleka" koshukela emzimbeni wethu ziyefana kakhulu - isiyezi, ubuthakathaka, ukulahleka kwemizwa futhi ngisho nokufenda ... Ngakho-ke, zama ukukuthola, siye kude kakhulu noma asitholanga ushukela owenele ...
Ungalusebenzisa kanjani ushukela omningi emzimbeni
Yebo, umsebenzi onzima - ukugcina isilinganiso noshukela, ubhekene nalabo abangakwazi ukucabanga impilo yabo ngaphandle kwamaswidi. Kepha, akuyona yonke into eyinkimbinkimbi kangako, into esemqoka isifiso sakho nomzamo omncane. Uma uqonda ukuthi kusobala ukuthi udlule ushukela - leyo ngxenye yekhekhe osheshe wayiqonda futhi usheshe uyinaka nabanye abantu, uyigeze yonke ngetiye elimnandi futhi “wayiphucula” ngoswidi ushokoledi - lokhu akuyona inhlekelele ! Ukunciphisa ushukela omningi emzimbeni wakho kuzosiza ... amanzi ajwayelekile. Amahora ama-5 ngemuva kokusebenzisa kabi ushukela (awukwazi ukukubiza ngenye indlela) udinga ukuphuza amanzi amaningi kunokuphindwe kabili uma udle ushukela. Okusho ukuthi, ngokweqiniso, uyaqonda ukuthi uma "ugwebela" ithani likashukela le-0.5, khona-ke udinga ukuphuza amalitha ayi-1.5 amanzi. Nasi isijeziso esinjalo ngezinyo elimnandi ne-ambulensi enjalo kulabo abaye balahlekelwa umuzwa wokulingana ...
Ngabe lokhu kusho ukuthi ushukela impi, futhi siyifaka "ohlwini lwabamnyama" bethu bemikhiqizo? Isinqumo esinjengalesi njengokwenqatshwa ushukela ngokuphelele, futhi, ngeke sizuze umzimba wakho. Ngemuva kwakho konke, empeleni, ushukela uw lowo mkhiqizo obaluleke kakhulu ekusebenzeni kwesitho sethu esibaluleke kakhulu - ubuchopho.
Ukuntuleka ushukela kungathinta hhayi kuphela izinga lakho lokusebenza, kodwa futhi kungadala isiyezi nokulimala kakhulu kwekhanda.
Akumnandi, ngekhanda, umzimba wethu ungasinikeza uphawu lokuthi awunalo ushukela ...
Ochwepheshe bezengqondo baphinde balifakazela iqiniso lokuthi abantu abazinciphisa ekusebenziseni ushukela bavame ukuhlushwa i-neurosis kanye nokudangala . Ngakho-ke, uma unomuzwa wokuthi manje uqala ukuwela esimweni sokudangala - ungaziphoqi uze ufike endaweni eyeqisayo - kungcono ukuphuza itiye noshukela (kodwa akufanele usebenzise kabi iresiphi enjalo).
Njengoba ukwazi ukubona, ezimweni ezithile, ukusetshenziswa koshukela kuyizuzisa nempilo yethu. Imfihlakalo yonke ibukeka sengathi ingakanani ushukela esiyiphuzayo nokuthi uluthi ushukela onjani. Isinyathelo esiya kwesobunxele kusiholela kumphumela olimazayo, igxathu eliya kwesokudla liholela ezinzuzweni zezempilo.
Ushukela onempilo kunayo yonke onsundu.
Ukuze ungahlali uzijezisa ngale ndlela, sincoma ukuthi ungene esikhundleni sikashukela omhlophe ojwayelekile nge-brown. Ah, sabhala ngaye ekuqaleni kokushicilelwa kwethu. Ukwakheka koshukela onjalo onsundu akukubi kangako, kodwa futhi kuyazuzisa umzimba wethu, kuqukethe amaminerali awusizo kithi nakimi - i-iron, potassium, ithusi kanye ne-calcium.
Uju lungaba futhi olunye ushukela.
Ngokuqondene nezindawo ezinoshukela - kungcono ukungabandakanyeki kuzo, kusukela ezinye izinhlobo zokufakwa esikhundleni zingalimaza kakhulu impilo yakho kunoshukela uqobo (ngakho-ke, isibonelo, obambele ushukela - cyclomat , okumnandi izikhathi ezingama-30 kunoshukela omhlophe, kungadala ukwehluleka kwezinso, futhi, njenge-esikhundleni se-saccharin - inezici ze-carcinogenic). Futhi, yize okuqukethwe kwabo kwekhalori kungaphansi kunokuqukethwe kwekhalori kushukela, kuyakudla, ungahle uhlangane nento engemnandi efana nomuzwa oqhubekayo wendlala. Uzohlala ufuna ukudla, uzoncika kakhulu ekudleni futhi ngenxa yalokho ... Shikashisa kakhulu isikali sakho sasekhaya, hhayi nhlobo kusiqondiso "sokususa". Ngaphezu kwalokho, izinhlobo eziningi zokufakwa esikhundleni sikashukela zibangela ukukhathazeka kwesisu - hhayi uphawu olumnandi kakhulu ...
Umzimba wakho nezwi lakho langaphakathi kufanele kube ngumeluleki wakho kuzo zonke izindaba ezihlobene noshukela. Bazokutshela ukuthi ungadla yini omunye uswidi noma ufake enye i-spoonful ushukela etiyeni.
Ividiyo ezingozini kashukela:
Namuhla sikhulume ngoshukela ekudleni esikudlayo, mayelana nezinhlobo zoshukela nokuthi lapho isifiso sethu esimnandi singaphenduka ukufa "okumhlophe". Sifunde nemininingwane eminingi ewusizo ngoshukela onsundu (kubalulekile ukukhetha ushukela womoba onsundu kunokuba uwenze inkohliso) - inawo wonke amathuba okuba enye indlela efanele futhi ithathe indawo kashukela omhlophe oyingozi kwimenyu yethu - singayifaka itiye, i-pastries ...
Wake wawunambitha ushukela onsundu? Ngokombono wakho, lumnandi kunoshukela omhlophe noma cha? Uvame ukuyisebenzisa kanjani? Silangazelela amazwana akho kanye nempendulo futhi sikucela ukuthi ujoyine iqembu lethu le-VKontakte, lapho ngokubambisana nawe singakwazi ukuqhubeka nengxoxo yalesi sihloko.
UShevtsova Olga, Umhlaba Ongenangozi
Ushukela nokubambela kwalo - imiphumela ezuzisayo neyingozi emzimbeni
Kwakungekho ushukela kusendulo. Abantu abaphila emhlabeni babedla uju njengamaswidi futhi njengesisekelo seziphuzo, uju bekuyinto ebalulekile ekudleni kwabantu ababehlukaniswa yimpilo yabo enempilo nokuphila isikhathi eside okungajwayelekile.
Abantu basendulo babehlala imibuthano emithathu kuya kwemine yempilo, umbuthano owodwa ulingana neminyaka engama-144, kuze kube yilapho bekude neNdiya, esifundazweni sayo eseningizimu yeBengal, abantu bebona ukunambitheka okumnandi komhlanga.
Ushukela womoba walethwa eYurophu ngamabutho ka-Alexander the Great (bawubiza ngokuthi uju ngalesosikhathi, kepha ayenziwa ngaphandle kokubandakanya izinyosi). Umkhiqizo udumile ngokungajwayelekile, uyabiza, uyaziswa kakhulu.
E-Russia, ushukela wavela ngemizamo yesazi saseJalimane isazi semvelo uSigismund Marggraf maphakathi nekhulu le-18, hhayi umhlanga, kodwa ibhungane. Kwenzeka esifundazweni saseTula, lapho kwakhiwa khona ifektri yokuqala yoshukela. Labo abasebenza efektri baba ngabokuqala ukuzizwa bebabaza impilo yomzimba bebonke namazinyo ikakhulukazi. Izifo ezingenakutheleka zeza emhlabeni wabantu abacebile. Lezi kwakuyizifo umuthi ongeke ukwazi ukubhekana nazo. Futhi kuphela ekuqaleni kwekhulu lama-20, ososayensi baqala ukusho ukuthi ushukela uyingozi. Odokotela bamazinyo baba ngabokuqala ukufika kulesi siphetho, khona-ke wonke umphakathi wezokwelapha ukhathazekile ngezinkinga zokusetshenziswa kwalo mkhiqizo.
E-USSR, kwaqalwa nezinhlelo ezikhethekile ukuze zingafakwa ekudleni kwabantu baseSoviet, ukuyifaka esikhundleni se-fructose noma ushukela. Ngale ndlela, lolu hlelo lwaphumelela ohlakeni lokunakekela ubuholi obudala bezwe. Abaphathi beqembu kanye nemindeni yabo basebenzise indawo yokubambela, umkhiqizo ongalimazanga umzimba, okuvumela ukuthi ufake izidlelezo, amaswidi nezinye injabulo yempilo ekudleni.
Ushukela - izinzuzo nemiphumela elimazayo
Ushukela wokuqala waqala ukutholakala eminyakeni eyizinkulungwane eziningana ngaphambi kwenkathi yethu, eNdiya. Yenziwa ngommoba. Isikhathi eside, kwakuwukuphela koshukela owaziwa ngabantu. Kuze kube manje, ngo-1747, usokhemisi waseJalimane u-Andreas Sigismund Marggraf, komunye wemihlangano ePrussian Academy of Sciences, akazange abike ngamathuba okuthola ushukela kubhungane. Kodwa-ke, ukukhiqizwa kwezimboni ushukela we-beet kwaqala kuphela ngonyaka we-1801, futhi lokhu bekunguquko embonini yokudla. Kusukela, kusukela lapho, ushukela usuphenduke kakhulu futhi wabiza kakhulu, amaswidi asukela ekudleni okuthe xaxa kancane kancane kancane aphenduka isigaba sokudla kwansuku zonke. Izithelo ezidabukisayo zalokhu zaziwa yithina sonke - izifo zamazinyo kanye nokukhuluphala sekuyinkinga yangempela ezweni lanamuhla.
Ushukela ucishe waba yi-sucrose emsulwa - i-carbohydrate, emizimbeni yethu ephukile ibe ushukela kanye ne-fructose futhi ingeyo-carbohydrate "esheshayo". Inkomba kashukela ka-glycemic ingu-100. Ushukela ungamandla amsulwa, awuthwali noma yikuphi ukulimala noma inzuzo, njengoba kunjalo. Izinkinga ziqala lapho sithola amandla amaningi kunalokhu esingakwazi ukucubungula. Cabanga ngokwenzekayo lapho ushukela ungena emizimbeni yethu. Ukuqhekeka kwe-Sucrose kwenzeka emathunjini amancane, kusuka lapho i-monosaccharides (ushukela ne-fructose) ingena khona egazini.Ngemuva kwalokho kuthathwa isibindi, lapho i-glucose iguqulwa ibe yi-glycogen - indawo ebekelwa kuyo amandla ngosuku lwemvula, engaguqulwa kalula ibuyiselwe ushukela. Uma, inani loshukela lidlula inani elifunekayo, elingashintshwa libe yi-glycogen, khona-ke i-insulin iqala ukusebenza, eguqula ushukela ube yindawo yokugcina amafutha omzimba. Futhi ukuchitha amafutha, umzimba wethu, oh ukuthi akuthandi kanjani, yingakho isisindo ngokweqile, ukukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, uma kunoshukela omningi ohlinzekwa ngokudla, khona-ke ukuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin kuyancipha, i.e. ngeke isakwazi ukuhambisa ushukela omningi emangqamuzaneni, okuholela ekwandeni okuqhubekayo koshukela wegazi, futhi kamuva, kungaholela kuhlobo 2 sikashukela.
Kepha ukuntuleka kwama-carbohydrate nakho kuyingozi. Umzimba udinga ukuthatha amandla endaweni ethile. Ngakho-ke, kufanelekile ukungakhulumi ngobungozi noma izinzuzo zikashukela, kanjalo, kodwa ngokusetshenziswa kwayo okunengqondo.
Ushukela wezithelo - izinzuzo nokulimaza
Ushukela wezithelo, noma i-fructose, uyisihlobo esiseduze seglucose, kepha ngokungafani nayo, ayidingi i-insulin ekusebenzeni kwayo, ngakho-ke ingasetshenziswa ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela. Kodwa-ke, ngaphandle kokuthi i-fructose nayo ingahle icutshungulwe ibe ngamafutha, akubangeli umuzwa wokugcwala, futhi ngenxa yalokho kungaba nomthelela ekuthuthukiseni ukukhuluphala. I-Fructose ayiqukethe ushukela kuphela, kodwa futhi nezithelo eziningi, ngenxa yokuthi yathola igama lazo.
Ushukela wamagilebhisi - izinzuzo nokulimaza
Ushukela wamagilebhisi ubizwa ngokuthi ushukela. Leli yi-carbohydrate eyinhloko ebandakanyeka kumandla we-metabolism womzimba womuntu. Izinzuzo nokulimala ushukela wamagilebhisi kuhluka kancane kushukela ojwayelekile. Umonakalo ubangelwa ukuthi kungenzeka kwezinhlelo zokufaka ama-caries kanye ne-Fermentation ezingaphazamisa i-microflora.
Ushukela womoba - izinzuzo nokulimaza
Ushukela wokuqala owaziwa esintwini. Ukuvunwa kusuka kumoba. Ekubunjweni kwayo, ifana ncamashi noshukela we-beet futhi iqukethe amaphesenti angama-99 sucrose. Izici zeshukela elinjalo ziyafana nalezo ezihlobene ne-beetroot.
Ushukela wesundu - izinzuzo nezilimaza
Kutholakala ngokomisa usuku, ukhukhunathi noma ujusi wesundu wesundu. Kungumkhiqizo ongaqondakali, ngakho-ke kubhekwa njengenye indlela enempilo ezinhlotsheni zesiko ushukela. Uma siqhathanisa lo ushukela nezinye izinhlobo, singasho ukuthi akunangozi.
Ukukhiqizwa ushukela kwaqala eNdiya kusuka kumoba. Ukuqalwa kokuqala kwezinsuku zikashukela emuva ku-510 BC, ngaleso sikhathi kwaba ukuthi umoba ukhule eNdiya futhi ushukela wenziwe ujusi wawo omnandi. Ngemuva kwalokho iSobaoba yavela ePheresiya naseGibhithe. Ngekhulu le-VI, umoba wawukhule cishe kuwo wonke amazwe anesimo sezulu esifanelekile, kufaka phakathi neChina.
NgeNkathi Ephakathi eYurophu naseRussia, eyayingenawo umkhiqizo wawo wokukhiqiza ushukela, ushukela wawungumbono ojabulisayo, futhi ngentengo wawulinganiswa nezinongo ezibizayo - isipuni 1 sikashukela sabiza u- $ 1. Amadodakazi omthengisi aze aba mnyama amazinyo awo ukuze agcizelele ingcebo yawo namandla okudla lo mkhiqizo ngaphandle kwemikhawulo. Akekho owacabanga ukuthi ushukela ulusizo noma uyingozi. Kepha engxenyeni yesibili yekhulu le-18, kwaqalwa indlela yokukhiqiza ushukela kusuka kuma-beet.
Kakade ngekhulu le-19, umkhiqizo uyekile ukubaluleka kangako ngenxa yokukhiqiza ngobuningi. Ngo-1843, umphathi wefekthri kashukela eCzech Republic wasungula ushukela wokuqala owawuhlobo lwama-cubes - ushukela ocoliweyo. Namuhla emhlabeni kukhona inani elikhulu lezinhlobo zoshukela. Ngaphezu kwakho konke, sazi ushukela omhlophe wekristalu. ERussia kuphela amathani ayizigidi eziyisihlanu alo mkhiqizo asetshenziswa minyaka yonke.